ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ ... တစ်ညတာ ...
အချစ်ဆိုတဲ့ အရာကို ... လိုက်ရှာရင် တွေ့ချင်မှ တွေ့ပါတယ် ... တွေ့မယ့်တွေ့တော့လည်း ... မထင်မှတ်ပါပဲ ... အချစ်ကို သေသေချာချာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ... ခံစားခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် ... ချစ်ခွင့်ရတဲ့ အချိန်တွေက တိုလွန်းပါတယ်ဗျာ ... ကံကြမ္မာက တစ်ညတာပဲ ... အချိန်ပေးတော့ ... ပြန်တွေးမိတိုင်း ... အသည်းတွေနာအောင် ... လွမ်းနေပါတယ် ... အချစ်ဦးဆိုတာမျိုးက ... တစ်ဘ၀လုံး သေတဲ့အထိ ... အသည်းထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်သလို ... ဝေးသွားတော့လည်း ... ပြန်တွေ့လေမလားလို့ ... တစ်ဘ၀လုံး လိုက်ရှာနေမိပါတယ် ...
ချစ်ဖူးသူတိုင်း ... ချစ်ဦးသူနဲ့ ညားကြပါစေ ...
သက်နိုင် မနေနိုင်တော့ ... စန္ဒီ့ရဲ့ “ဟင့် ... ကိုနော်” ဆိုတဲ့ အသံလေးက ... သက်နိုင်စိတ်ကို ... ပိုပြီး တွန်းအားပေးနေသည် ... သက်နိုင် ... အတွင်းခံလေးကို ... ဘေးကပ်လိုက်သည် ... ခက်ခက်ခဲခဲပါပဲ ... အတွင်းခံလေးက ... စန္ဒီရဲ့ ချစ်ရည်တွေ စိုရွှဲနေတော့ ... ကပ်နေသည် ... ပန်းလေး မို့မို့က ... အစွမ်းကုန် ... ဖောင်းကားနေတော့ ... ပိုပြီးကြပ်သည် ... မတတ်နိုင် ... သက်နိုင် ... လက်လေးနဲ့ ... အတွင်းခံလေးကို ... ဘေးကပ်လိုက်သည် ... စန္ဒီနာသွားမှာလည်း စိုးသည် ... အတင်းမလုပ်ချင် ... ဂရုတစိုက်နဲ့ ... ဘေးဖယ်လိုက်တော့ ... စန္ဒီရယ် ... ကိုယ် ရူးပြီ ... စန္ဒီ ... အချစ်ရဲ့ ... ပန်းလေးက ... လှလွန်းသည် .
စန္ဒီ ... အောက်နှုတ်ခမ်လေးကို ... ကိုက်ထားသည် ... ဘာလို့ ... ဒါတွေ လာပြောနေတာလဲဟင် ... စန္ဒီ့အသည်းတွေ ကွဲသွားစေချင်တာလား ..
“အို ... ကိုရယ် ... ဟင့် ... ဟင့် ... ဟင့်”
“မရတော့ဘူး ... မရတော့ ... စန္ဒီလေ ... စန္ဒီ ...”
ချစ်မြေပြင်ကို နှစ်နေရာဖွင့်တော့ ... အောက်က ချစ်သူခမျာ ... ခံရခက်အောင် ... ကော့ပျံလန်နေသည် ... ရွှေလည်တိုင်ကို အနမ်းခံလိုက်ရချိန်မှာ ... စန္ဒီ့စိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ ... တင်ပါးက အစွမ်းကုန်ကော့ပေးလိုက်ပြီး ... ပန်းလေးက အားကုန်သုံးကာ ... ညှစ်ထားရင်း ... ချစ်ဝတ်ရည်တွေကို ... ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါသည် ...
“ဟင့် .... ဟင့် ... ဟာာ”
စန္ဒီ ... ပြီးသွားပြန်ပါပြီ ... ချစ်ဝတ်ရည်တွေကို ... ရွှဲရွှဲစိုကုန်လို့ ... အပြင်ကို လျှံကျလာပြီး ... ပေါင်ကြားက မွေ့ယာပေါ်ကို ... စီးကျလာပါသည် ... ဒါပေမယ့် ... ချစ်လွန်းတဲ့ချစ်သူကတော့ ... မပြီးနိုင် ... မစီးနိုင် ... ချစ်မိုးတွေ ဆွေနေသည် ... ချစ်ပါ ကိုရယ် ... ချစ်ပါ ... အားရအောင် ချစ်ပါ ...
ချစ်ရသူလေး ... တစ်ချီပြီးသွားမှန်း ... သက်နိုင် ... သိပါသည် ... ချစ်ပန်းလေးထဲကနေ ... တဇက်ဇက်နဲ့ ... ညှစ်ထားရင်း ... ပူနွေးတဲ့ အထိအတွေ့က ... ကောင်းလိုက်တာ ... သက်နိုင် ... ဆောင့်နေရင်း ... စန္ဒီ့မျက်နှာလေးကို ကြည့်တော့ ... အားရကျေနပ်တဲ့ ... မျက်နှာလေးနဲ့ ... သက်နိုင်ကို ... ပြုံးကြည့်နေပါသည် ...
“အရမ်းချစ်တယ်နော် ... အသည်း”
“ချစ်တာပေါ့ ... ကိုရယ် ... ချစ်တာပေါ့”
“အသည်းကို ... ခပ်ကြမ်းကြမ်းချစ်မယ်နော်”
“အို ... ကိုရယ် ... ချစ်ပါ ... အားရအောင်သာ ချစ်ပါ ... ကိုရယ်”
သက်နိုင် ... စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ... ဖိနမ်းပစ်လိုက်ပြီး ... အလိုက်သိလွန်းတဲ့ချစ်သူလေးကို ... ချစ်အနမ်းတွေ ပေးလိုက်သည် ... အောက်ကလည်း ... သက်နိုင် ညီလေးကို ... အ၀င်အထွက် ကြမ်းကြမ်းဆောင့်နေရာကနေ ... တဆုံးဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်သည် ...
“အို ... ကို့ ... ဟင့် ...”
စန္ဒီ့ ခါးလေးက ... အမြန်လိုက်ကော့လိုက်ပြီး ... သက်နိုင် ... ညီလေးကို မလွတ်တမ်း ... လိုက်ညှစ်ပါသည် ... အော် ... စန္ဒီ ... စန္ဒီ ... အချစ်အကြောင်း သူသိသွားတော့ ... မလွှတ်နိုင်အောင် ... ချစ်နေပြီပေါ့ ... သက်နိုင် ... အမြန် ထုတ်ပြီး ... တဆုံး ပြန်ထည့်သည် ... စန္ဒီ့တင်ပါးလေး ... မွေ့ယာအောက်ကို မြုပ်သွားသည်အထိ ... ဆောင့်ချပစ်လိုက်သည် ... ဆောင့်ချက်က ... နုနုငယ်ငယ်ချစ်သူအတွက် ... ပြင်းလွန်းပါသည် ...
“အာ ... ဟာ ... ကို့ ... အရမ်းပဲ ... ဟင့် ...”
နောက်တစ်ချက် ... တဆုံး ... ထုတ်သည် ... တဆုံး ထည့်သည် ...
“အို ... ကို ... မရက်စက်နဲ့ကွာ ... စန္ဒီ မခံနိုင် ...”
စန္ဒီ ငြီးလို့မှ မဆုံးခင် ... နောက်တစ်ချက် ... တဆုံး ... ထုတ်သည် ... တဆုံး ထည့်သည် ... စန္ဒီ မတတ်နိုင်တော့ ... အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ... ပြတ်ထွက်မတတ်ခဲထားရင်း ... ချစ်သူရဲ့ အချစ်ကြမ်းကြမ်းကို ... အံကြိတ်ကာ ခံနေရသည် ... မခံနိုင် ... စန္ဒီ မခံနိုင် ... နားထင်က သွေးတွေတောင် တဒိန်းဒိန်းနဲ့ ... ခေါင်းတောင် မူးလာသည် ... အောက်ကပန်းလေးထဲကို ... ဓါးထည့်ခံရသလိုပဲ ... နာသည် ... နာသည်ထက် ... တစ်ချက်တစ်ချက် ... သက်နိုင် ... ဒုတ်ဖျားက ... ဒ-်နဲ့ ... တစ်ခုခုကို တိုက်မိသွားသည် ထင်သည် ... လူက တုန်ကနဲ တုန်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသည် ... ပန်လေးထဲက ... ချစ်ရည်တွေကလည်း ... ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ... အံကျလာသည် ...
“ခဏလေးပါ ... အသည်းရယ် ... ဟာ ... ဟာ ... ဟာ”
သက်နိုင် ... စန္ဒီ့ကို ... အစွမ်းကုန် ... ချစ်ရင်း ... ထိပ်ဖျားက ... တင်းကနဲ ဖြစ်သွားပြီး ... အကြောတွေ တုံ့ဆိုင်းကုန်ပြီး ... တဇတ်ဇတ်နဲ့ ... ပြွတ်ကနဲ အရည်တွေ ... ပက်ဖြန်းပစ်လိုက်သည် ... ပြီးဆုံးခြင်း ... ကျေနပ်ခြင်း ... အားရခြင်း ... ချစ်မြတ်နိုးခြင်း ... ခံစားချက်များနဲ့ ... ချစ်သူကို ... ကြင်ကြင်နာနာလေး နမ်းပစ်လိုက်သည် ... ချစ်ဦးသူလေးက ... မျက်လုံးလေး မှိတ်ကာ ... ငြိမ်နေသည် ... သူလည်း မောရှာမပေ့ါ ... သက်နိုင် ... နောက်ဆုံးအချီ ... အချစ်နည်းနည်း ... ကြမ်းသွားသည် ... သူ အချစ်ကြမ်းသမျှ ... အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ကာ ... အံကြိတ်ပြီး ... အချစ်ခံတော့ ... အော် ... ငါ့ကို သိပ်ချစ်ရှာပါလားလို့ ... တွေးမိပြီး ... ရင်ထဲမှာ အချစ်တွေ တိုးလို့ လာပါသည် ... သက်နိုင် ... ချစ်ဦးသူနဲ့ ... ချစ်ရွက်လှေ ... အစွမ်းကုန် ဖွင့်လိုက်တော့ ... ရှိသမျှ အားတွေ ကုန်သွားပြီး ... မျက်စိက မှေးလာသည် ... သက်နိုင် ... စန္ဒီကို့ ဖက်ပြီး ... အိပ်ပျော်သွားသည် ...
“ကို ... ကိုရေ ... ထတော့လေ ... စန္ဒီ သွားရတော့မယ် ...”
“ဟွန် ... စန္ဒီက ဘယ်သွားမလို့လဲ”
“စန္ဒီ့ကို ... သူတို့လာခေါ်နေကြပြီ”
“မသွားပါနဲ့ ... စန္ဒီရယ် ... ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်မှတ်လား”
“ချစ်ရင် မသွားပါနဲ့ ... စန္ဒီရယ်”
“မရတော့ဘူး ... ကိုရယ် ... သွားရတော့မယ် ... နောက်ဘ၀ကျမှ ဆုံတော့မယ်နော်”
“မသွားရဘူး ... စန္ဒီ ... မသွားရဘူး”
သက်နိုင် ... စန္ဒီ့ကိုယ်လေးကို ဖက်ထားသည် ... မရ ... တဖြေးဖြေးနဲ့ ... စန္ဒီ့ကိုယ်လေးက ... လေပေါ်ကို လွင့်တက်လာရင်း ... သက်နိုင်ကို ... ပြုံးပြုံးလေး နှုတ်ဆက်သွားသည် ...
“သွားပြီနော် ... ကို ... သွားပြီ”
သက်နိုင် ... တစ်ယောက်ယောက်က ... ဆောင့်နှိုးလိုက်လို့လားမသိ ... လန့်ပြီး ... နိုးလာသည် ... အော် ... ငါ အိမ်မက်တွေ မက်နေတာပဲ ... လို့ တွေးမိပြီး ... စိတ်သက်သာရာရသွားသည် ... သက်နိုင်ဘေးမှာ ... ချစ်သူလေးက ... ပုံ့ပုံ့လေး ... လှုပ်တောင်မလှုပ် ... ကွေးကွေးလေး ... အိပ်ပျော်နေသည် ... အော် ... ချစ်ဦးသူလေးခမျာ ... သနားပါတယ် ... သူ အချစ်ကြမ်းသမျှ ... သည်းငြီးခံတော့ ... ချစ်အလိုလိုက်ရှာသည် ... သက်နိုင် ... စန္ဒီ့ နဖူးလေးပေါ်က ... ဆံပင်လေးကို ... သပ်ပြီး ... မွှေးမွှေးလေး ပေးလိုက်သည် ... ဟင် ... သက်နိုင် ... စိတ်ထဲ ထင့်သွားသည် ... စန္ဒီ့ကိုယ်လေးက ဘာလို့ အေးစက်နေတာလဲ ... သက်နိုင် ... စန္ဒီ့ရင်ဘတ်လေးကို ... နားနဲ့ ကပ်ပြီး ... နားထောင်ကြည့်ပြီး ... ရင်တွေ စို့သွားသည် ... နှလုံး မခုန်တော့ပါလား ... ဒါဆို ဒါဆို ... သက်နိုင် ... ဘောင်းဘီကို အမြန်စွပ် ... စန္ဒီ့ အင်္ကျီတွေကို အမြန်ဝတ်ပေးပြီး ... အပြင်ကို အမြန် ပွေ့ချီပြီး ...
“လုပ်ကြပါအုံးဗျာ ... လုပ်ကြပါအုံး”
ဟိုတယ်က ... ညဘက် တာဝန်ကျနေတဲ့ ... ၀န်ထမ်းတွေ ပျာယာခပ်ပြီး ... ဆရာဝန်ခေါ်တဲ့လူကခေါ် ... အရေးပေါ် သူနာပြုနနည်းနဲ့ ... အသက်ရှူအောင် ... သက်နိုင်ကို လုပ်ခိုင်း ... ဒါပေမယ့်ဗျာ ... ကံကြမ္မာက ရက်စက်လွန်းပါတယ် ... သက်နိုင် ရဲ့ အချစ်ဦး ... စန္ဒီ ... အရမ်းချစ်သော စန္ဒီ ... အသက်မရှူတော့ ... သေသွားပြီ ... ဆရာဝန်ကတော့ သေချာစစ်ဆေးပြီး ... စန္ဒီ ... သေဆုံးသွားသည် ဟု ... အတည်ပြုလိုက်သည် ... သက်နိုင် ... ရူးပြီ ... ချစ်ရပါသော စန္ဒီ ... ညကမှ ... တွေ့တဲ့ အချစ်ဦး ... ရူးရူးမူးမူးနဲ့ ... အချစ်ကြမ်းလိုက်မိတာ ... ငါ့ကြောင့် ငါ့ကြောင့် ...
“စန္ဒီ ... သေတာ ... ငါ့ကြောင့် ငါ့ကြောင့်”
အချစ်ကြောင့် ... မူး ... အချစ်ကြောင့် ရူးကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ ... သက်နိုင်ဆိုသော တစ်ယောက်လည်း ပါပါတယ်လေ ... သိပ်လှတဲ့ ကမ်းခြေလေးမှာ ... အချစ်နတ်သမီးလေး စန္ဒီနဲ့ ... တွေ့ဆုံ ချစ်ခွင့်ရပြီး ... ချစ်ပင်လယ်ကို ... ချစ်သူနှစ်ဦး ... လက်ပစ်ကူးရင်း ... အသည်းတစ်ခြမ်းမှာ ... ဘ၀တပါးကို ... ခွဲခွာသွားတော့ ... ကျန်ရစ်သူ ... ကျွန်တော့်မှာ ... ၀မ်းနည်းပက်လက် ... တမ်းတမ်းတတ နဲ့ ... သောင်ပြင်မှာ “စန္ဒီ” “စန္ဒီ” “စန္ဒီ” ... ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ... ရေးခြစ်ရင်း ... ကြေကွဲမျက်ရည်များနဲ့ ... နောင်တရရင်း ... အရူးတစ်ပိုင်း ဖြစ်နေရရှာလေတော့သည် ...
သူငယ်ချင်းကအကူအညီတောင်းလာလို့ပါ သူ့ပေ့ခ်ျလေးလူမသိသေးလို့ ကူညီပါဦးတဲ့ like and share လေးမဆလိုက်ကြရအောင်ဗျာ
GF ရဲ့ BFF များ
မောင်မောင်နဲ့ဇင်ဇင် ရေတူတူဝင်ချိုးနေကျတာကို သူမ သူတို့အခန်းထဲ ကုတင်ပေါ်ကနေစောင့်နေတယ်
'မောင် ရွှေမိကို လိုးရတော့မယ် စိတ်တွေ မထဘူးလား'
'ရွှေမိကို လိုးရမှာလည်း စိတ်ထတယ် ဇင့်ကို ရွှေမိရှေ့မှာလိုးပြရလည်း ရင်ခုန်တယ်'
'အပိုတွေ သူက အတွေ့အကြုံမရှိတာကြနေတာပဲ'
'ကဲပါ ဇင်ရင် တော်ကြစို့ ရွှေမိလေးမျှော်နေတော့မယ်'
'ကဲ ရွှေရေ မောင်ကတော့ ရွှေ့ကို လိုးချင်လှပီတဲ့'
'ဟုတ်တယ် မိဇင်နော် နင် တော်တော်တတ်နေလား'
'ရွှေရယ် ရွှေ့အဖုတ်လေးရွှဲနေပီမလား ရိုးသားပါ ပြောနေတာကြာတယ် မောင်သွားတော့'
တဘက်ကို သူတယောက်တည်း အပိုင်သိမ်းလိုက်တယိ
မောင်မောင် ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ တောင်နေတဲ့လီးကို ရွှေမိ သေချာငေးကြည့်မိရင်း ကြက်သီးပါထနေပုံပဲ
'မောင့် ဟာကြီးက စချင်နေပီမလား'
မောင်မောင် ရွှေမိကို ကုတက်ပေါ်လှဲလိုက်ပီး အဝတ်တွေချွတ်ပေးလိုက်တယ်
ပီးတော့ ကုတင်အောက်ကို ခြေချထာပီး သူက ကုတင်အောက်ကို ဒူးထောက်ထိုင်ကာ ရွှေမိ ပေါင်ကြား မျက်နှာ အပ်ပီး အဖုတ်လေးကို ယက်လိုက်တယ်
'အီး အား မောင်ရယ် မပြောမဆိုနဲ့'
'ဟုတ်ပါ့ မောင်ရယ် '
ဇင်ဇင် ကုတင်ပေါ်တတ်ပီး ရွှေမိကို kissingတွေဆွဲ နို့တွေနယ်ပေးလိုက်တယ်
ခနနေတော့ မောင်ကုတင်ပေါ်တတ် ရွှေမိကို သေချာနေရာပြန်ချပီး
ကုတင်ပေါ်သူမှောက်လျက်ပဲ ရွှေမိ အဖုတ်ကို ထပ်ယက်ပါတယ်
ဇင်လည်း ရွှေမိကို Kissingဆွဲလိုက် နို့စို့လိုက်နဲ့ မောင့်နားကပ်ကာ ဖင်လေးထောင်လိုက်ပါတယ်
မောင်မောင် ညာဘက်မှာဆိုတော့ ညာဘက်လက်နဲ့ ဖင်လေးထောင်ကုန်းနေလို့ ပြူးထွက်နေတဲ့ ဇင်ဇင့် အဖုတ်ကို နိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်
'အားး အီးး မောင်ရယ် မရတော့ဘူး ရွှေ ပီးချင်ပီ အားးး အီူး ဟင့် ဟင့်'
ရွှေမိ kissingဆွဲနေတဲ့ ဇင့်ကိုတွန်းဖယ်ပီး မောင်မောင့်ခေါင်းကို သေချာကိုင်ပီး သူ့ဆောက်ဖုတ်နဲ့ မောင်မောင့်မျက်နှာကို တရကြမ်းပွတ်ပီးပီးသွားပါတယ်
'ရပါတယ် ရွှေရယ် ရွှေခနားနား ဇင့်အလှည့်'
မောင်မောင်နဲ့ရွှေက ဘေးချင်းကပ် လှဲလိုက်တယ်
ဇင်ဇင်ကတော့ မောင့်အပေါ်ကတက်ဆောင့်ဖို့ အသင့်ပြင်နေတယ်
တောင်မတ်နေတဲ့ မောင်မောင့် လီးပေါ် ဇင်ဇင် အဖုတ်လေးဖြဲပီး ထိုင်ချလိုက်တယ်
'ဇင့် ဆောက်ဖုတ်ထဲ မောင့်လီးဝင်နေတာ ကြည့်ပီး ရွှေရင်မခုန်ဘူးလား'
'အခုမှ ပီးခါစကို အဖုတ်က မယိုးမယွဖြစ်လာပြန်ပီမောင်ရယ်'
'ကဲ ဇင့်ကိုလည်း အဖက်လုပ်အုံး ကဲ ကဲ ကဲ'
'အားး အီး ဇင်ရယ် မောင့်လီးကျိုးပါ့မယ် ဖြေးဖြေးစောင့်နော်'
'အား အီးး စောင့်တိုင်း ခံရတာ ဇင် ဖီးအမြဲတတ်တယ်မောင်ရယ်'
'အင့် အင့် မောင်လည်း ကော့လိုးပေးမယ်'
'အမယ်လေးးး မောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ'
မောင်မောင် ဇင်ဇင့်ဖင်ကို အောက်ကပင့်က ကော့လိုးပေးတော့ ဇင် မျက်ဖြူပါစိုက်နေတယ်
ရွှေမိ မနေနိုင်တော့ပဲ အဖုတ်ကို ဖြဲပွတိနေမိတယ်
ဇင်ဇင် ကိုယ်ရှေ့ကို ကိုင်းလာပီး ရွှေမိပေါင်ကြားမျက်နှာ အပ်မိတော့
ရွှေမိလည်း သေချာခေါင်းကိုကိုင်ပီး သူ့ဆောက်ဖုတ်နဲ့ဇင်ဇင့်မျက်နှာအပ်ပီး ပွတ်လိုက်တယ်
'အား အမယ်လေးးး တော်ပီ မောင် ဇင်ပီးပီ '
ဇင်က ခေါင်းရင်းဘက် ရွှေက ဇင့်ကိုကြည့်ပီး ဖင်ကုန်းထားတယ်
မောင်မောင်က ရွှေ့အနောက်နေ ရွှေကိုလိုးရင်း ဇင့်ကိုလည်းမြင်နေရတယ်
'ဖျန်း ဖျန်း ရွှေဖင်တူံးတွေက ရိုက်လို့ကောင်းတယ်း ဖျန်းဖျန်း'
ဖင်ကိုရိုက်လိုက်တိုင်း လန့်လန့်ပီး ဟမိ ညှစ်မိနေတဲ့ ရွှေမိ ဆောက်ဖုတ်က အထဲဝင်နေတဲ့မောင်မောင့်လီးကို ညှစ်ဆုပ်နေတော့ မောင်မောင်ဖီးတွေတတ်နေတာပေါ့
'အီးး ဟင့် အင်းး ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်'
'မောင်လည်း အရမ်းကောင်းတယ် ရွှေ ဆောက်ဖုတ်က ကြပ်ပီး စီးနေတာပဲ
'အင်းး စောင့်လိုးမောင် နာနာလေး'
'အင်းး လိုးမှာပေါ့ အင့် အင့် အင့်'
ရွှေမိရှေ့ကို ဝမ်းလျားမှောက်လှဲသွားတယ် မောင်မောင့်စောင့်လိုးအားကြောင့် ဒါကိုစောင့်နေတဲ့ ဇင်ဇင် အဆင်ပြေသွားပီး သူ့အလှည့်ပဲလေ
ရွှေအရမ်း Feelတတ်နေပီး ဇင့်ဆောက်ဖုတ်ကို ယက်ပေး စုပ်ပေးလိုက်တယ်
'အူးးး ကောင်းလိုက်တာ ရွှေရယ် မောင် ရွှေ့ကိုအကြမ်းဗတမ်းလိုးပစ်ပီး ပီးချင်ပီကွာ'
'ဇင်လည်းကောင်းနေပီ ရွှေ ယက်စမ်းပါ ဇင့်ဆောက်ဖုတ်ကို ယက်စမ်း'
'ရွှေလည်း ပီးချင်နေပီ အဖုတ်က ကလိကလိဖြစ်နေပီ နာနာသွက်သွက်လေးစောင့်ပါမောင်ရယ်'
'အမယ်လေးးး လိုးလို့ကောင်းလိုက်တဲ့ဆောက်ဖုတ်ကြီး အင့် ဟာ အင့်ဟာ'
'မိဇင် ငါ့ဘဲကြီးက ရန်ကုန်မှာ ချိန်းတွေ့ဖို့ခေါ်နေတယ်ဟာ
'မိယု နင့်ဘဲက ဘယ်ကလဲ ကောင်မနော် '
'နယ်ကပဲဟ Onlineပေါ်မှ ချစ်မိသွားကြတာ'
ဇင်ဇင့်ရဲ့ နယ်က သူငယ်ချင်းမ မိယု ရိုးပုံရိုးအ အညာသူမလေးနဲ့ဖုန်းပြောနေတာဖြစ်တယ်
'ငါကလည်းရန်ကုန်လာမှာ သူလည်းရန်ကုန်လာမှာ တွေ့ကြမလို့ ကူညီပါအုံး'
'ကူညီတာက ဟုတ်ပါပီ ဘယ်မှာတွေ့ကြမှာလဲ နင်တို့က ဘယ်မှာ တည်းမှာလဲ'
'အဲ့လောက်ဆို ငါသဘောပေါက်တယ် ကောင်မ ညည်းဘဲက ညည်းကို တောင်းဆိုနေပီမလား'
'ရှက်မနေနဲ့ ငါနဲ့ငါ့ဘဲကို ဆရာတင်လိုက် အကုန်စီစဉ်ပေးမယ် ဟုတ်ပီလား'
Onlineက သိတဲ့ ယောက်ျားတယောက်ကို ချစ်မိသွားတာလား
သူနဲ့ ညတိုင်းပြောဖြစ်ကြတဲ့ SEXအကြောင်းတွေကြောင့်လား မိယု မသိတော့ပါဘူး
သူပို့ပေးတဲ့ သူ့ဟာကြီးကို သူစွဲလမ်းနေသလိုပဲ သူလည်း ယုရဲ့ အဖုတ်ကို တမ်းတနေမှာပဲ
'မောင်ရေ ပါကင်လေးနော် ယုက ဒါပေမယ့် ရိုးလွန်းတယ်
'ဟွင်း မြင်ရင် လီးတောင်မှာပါ ကြံကြစို့'
ကားဂိတ်ကို မောင်မောင်တို့အတွဲ သွားပီး မိယုကို ကြိုကြတယ်
မိယု ဘဲက ကားလက်မှတ်မရလို့ ညနေလောက်မှရောက်မယ်တဲ့
မိယုကို ဇင်အိမ်မှာ ခေါ်ထားလို့ရပေမယ့် မခေါ်ပဲ တည်းခိုခန်းကိုသာ သွားကြတယ်
'နင်တယောက်တည်း ဖြစ်ရဲ့လား ငါတို့ပြန်တော့မယ်'
တမင် ပြောခြင်းဖြစ်ပေမယ့် 'မိဇင်ရယ် နင်ကလည်း ငါ့ကိုကို လာတဲ့ထိစောင့်ပေးပါအုံးဟာ'
'အေးပါ အေးပါ မောင်ရေ အောင့်ထားလိုက်အုံးနော် ညကျမှ မောင်စိတ်ကြိုက် ဆွဲတော့ ခုတော့ မောင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ'
'ဇင်ကလည်း ယု ရှေ့မှာ'
'ယုလည်း ညနေဆို သိတော့မှာပဲကို'ဆိုပီး
ယုကိုသေချာကြည့်ပီး မောင့်ကို Kissingဆွဲလိုက်တယ်
ယု ကြပ်သေသေနဲ့ ကြည့်နေမိတယ်
မောင်မောင်ကလည်း သေချာ ပြန်နမ်းနေရင်း ယုကို လှမ်းကြည့်တယ်
ပီးတော့ ဇင်ဖင်ကို လက်နဲ့ကုပ်လိုက်တာပါ ယုမြင်လိုက်တယ်
'ကဲ ဇင် ယုလန့်နေပုံပဲ'
'မိယုရယ် နင်ဘုမသိဘမသိဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ နင့်ဘဲနင့်ကို စွဲလမ်းအောင်နင်လုပ်နိုင်မှ သူက ထားမသွားမှာ မောင်ဆို ငါ့ကို စွဲနေတာလေ အားတိုင်း
လုပ်ဖို့ပဲ ကြံနေတာ သူက တွေ့လား ခုတောင် သူ့ဟာကြီးထနေပီ'ဆိုပီး
ဘစ်မဝတ်ထားလို့ ပုဆိုးရှေ့ကော့ဖောင်းနေတဲ့ မောင့်လီးကို ဇင်လက်နဲ့ဆုပ်ပီး ယုကို လှမ်းပြတယ်
'အမယ်လေး မိဇင်တော်တော့ တော်တော့ ငါ ရေမိုးချိုးလိုက်အုံးမယ်'
'ကောင်မလေး ရှက်သွားပီ ဟိတ် ညည်းလူ လီးက မောင့်လောက်မကြီးရင် ညည်းထက် ငါသာတယ်မှတ်ပါ ကောင်မရေ'
မိဇင် တော်တော် နှာဘူးထတာပဲ မောင်မောင့် ဟာကြီးကလည်း ပုဆိုးကွယ်နေလို့သာတော်တော့တယ် ကိုကို့ထက် ကြီးလား မသိဘူး
ကြည့်ချင်မိတယ် မိယုတယောက်တည်းတွေးနေရင်း ရေချိုးနေတာ
အဖုတ်လေးက အရည်တွေစိုရွှဲနေပီး လက်နဲ့ အသာလေးပွတ်ကြည့်မိတယ်
မိယုရေချိုးက ထွက်လာတော့ ဟိုအတွဲက ကုတင်ပေါ်မှာ စောင်တူတူခြုံထားကြတယ်။ခေါင်းလေးတွေပဲပေါ်တယ်။
မိဇင်က မျက်လူံးလေးစင်းပီးမိန်းနေတယ်။ မောင်မောင်က ယုကို တကိုယ်လုံးသေချာကြည့်တယ်။
မိယု မောင်မောင့်ကို ရင်တွေခုန်နေမိတယ်
'ဟင်းး ဟင်းး မောင်ရယ် ယု ရေချိုးတာကြလိုက်တာ ညည်းသံလေးနဲ့ပြောတယ်'
စောင်ခြုံထားပီး ဘာလုပ်နေကြလဲ မိယု ရိပ်မိပါတယ်
မောင်မောင် ဇင့်ကို နိုက်ပေးနေတာဖြစ်မှာပေါ့
'ငါ ခရီးပမ်းလာတယ်ဟာ ခန လှဲအုံးမယ်'
'လှဲပေါ့ မောင် ဒီဖက်နည်းနည်းတိုးပေးလိုက် မောင်'
မိယု အဝတ်အစားလဲပီး ကုတင်ပေါ်တတ်ကာ မောင်မောင့်ဘေးနားဝင်လှဲလိုက်တယ်
'မိယု စောင်ထဲဝင်မလား Welcomeနော်'
'မိဇင်နော် နင် အတော်ရွနေ'
မိယု ဘေးတစောင်းလေးလှည့်ပီး စုံတွဲကို ကျောပေးလိုက်တယ်
'မောင် မိယု ကိုဘာလို့ ခိုးကြည့်နေတာလဲ ဒီဘက်လှည့်ပါ မျက်နှာက
ဟိုဟာမ နင့်ဖင်တူံးကြီးပစ်ကော့ကောက်မထားနဲ့ ငါ့လင်တော်မောင်က အငမ်းမရကြည့်နေတယ်'
'ငါ ဘာမှမပြောတော့ဘူးဟေ့' ဆိုပီး ယု စောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံလိုက်တယ်
'ဟင်းးး မောင်ရယ် မောင့်လီးကြီးကို ကိုင်ထားရတာ လက်တောင်ညောင်းတယ် မောင့်လီးကတနေ့တခြားကြီးကြီးလာတယ် ဇင့်စောက်ဖုတ်လေးတော့ သနားပါတယ်'
'အူးး အရမ်းမညစ်နဲ့လေ ဇင်ရယ် တိုးတိူးပြော ယုကြားသွားအုံးမယ်'
'မကြားပါဘူး ကြားလည်း ဘာဖြစ်လဲ မောင်ရယ် သူလည်း မကြာခင် သူ့ဘဲကြီး လီးနဲ့ အလိူးခံရတော့မှာပဲကို နှိုက်ပါ မောင်ရယ် ဇင့် အဖုတ်ကို နှိုက်ပေး ကောင်းကောင်းလေးနှိုက်ပေးပါ ဟင်းးး ဟူးး'
ယု မကြားပဲနေမလား ကြားတာပေါ့ ပေါင်ကြားတောင် လက်ထည့်ပီး ကွေးနေရတယ်
အဖုတ်လေးကလည်း မယိုးမယွဖြစ်နေတယ် သူလှည့်ကြည့်ချင်နေမိတယ်
'ဟင်းး မောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ '
ယု မိဇင်ကို အမြင်ကပ်နေပီ
'ဇင် မောင် လိုးချင်ပီကွာ ဇင့်စောက်ဖုတ်လေးကို မောင့်လီးကြီးနဲ့ လိုးချင်ပီ'
တစ်တစ်ခွခွပြောနေတဲ့ မောင်မောင့်အသံကို ကြားပီး ယု ကြက်သီးပါထပီး အရည်ပါရွှဲထွက်နေပီ
'မောင်ရယ် ဇင်လည်း ခံချင်လှပါပီ ယု နိုးသွား အုံးမယ်'
'သူမသိအောင် လိုးမှာပေါ့ သူ အိပ်ပျော်နေလောက်ပါပီ'
'ကဲ စောင်ဖယ်ပီ ဖြဲပေးအုံး အဖုတ်လေးကို'
'မောင် ဖြည်းဖြည်းလိုးနော် ယု နိုးလာမှ'
'အခု မှစိုးရိမ်နေတယ် ခုနကတော့ သူပဲ လိုက်စနေပီ'
'မောင်ကလည်း ဟွင်းနော် ယုကြားသွားပီး မောင်လိုးတာ ခံချင်စိတ်ဖြစ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ'
'ဇင်ကလည်း မောင့်သဘောပါ ဇင့် အဖုတ်လေး မောင်ရိုးမှာစိုးလို့ တခြား အဖုတ်လေးလိုးစေချင်ပါတယ် နောက်ပီး ယုလည်း အလေ့အကျင့်ရတာပေါ့'
သူတို့က သေချာတောင်တိုင်ပင်နေကြသေး လိုးမှာဖြင့်မလိုးကြသေးဘူး ဒီမှာ အရည်ရွှဲနေလှပီ
'အားး အမယ်လေး မောင်ရယ် လိုးတတ်လိုက်တာ'
'ဇင်ရယ် ဇင့်ဆောက်ဖုတ်ကို လိုးရတာ မရိုးနိုင်ပါဘူး'
'နာနာလေးစောင့်ပါ မောင်ရယ် ဇင် Feelအရမ်းတတ်နေပီ'
ယု စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး မသိမသာလေး လှည့်ကြည့်မိတော့
၂ယောက်သား ကိုယ်တုံးလုံးတီး ကို လိုးနေကြတာ မောင့်လီးကြီးက ဇင့်အဖုတ်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတာ ကြည့်ပီး ယု စိတ်တွေမရတော့ပါဘူး
လက်က အဖုတ်ကို ပွတ်မိ နှိုက်မိနေပါတယ်
စုံတွဲက မသိယောင်ဆောင်ပီး လိုးနေပါတယ်
'အူးး ဟင်းး ဟင်းး မောင်ရယ် ဇင် ပီးပီ ဆောင့်ဆောင့် နာနာဆောင့်
'ဇင် မောင် မပီးသေးဘူး '
'မောင် မြန်ုမြန်ပီး အောင် လိုးလေ မောင့် စိတ်ထဲမှာ အသစ်အဆန်းဖြစ်အောင် ဇင့်ကိုလိုး နေတယ် သဘောမထားနဲ့ ယုကို လိုးနေတယ် သဘောထား'
'အမယ်လေးးး ညှစ်ပေး ဇင် ရေ လိုးရတာကောင်းလာပီ'
'မောင်ကလည်း ဇင်မဟုတ်ဘူး ယု ပါဆို ခု လိုးနေတာ ယု စောက်ဖုတ်လေးကို မောင်လိုးနေတာ အားရပါးရလိုးစမ်းပါမောင်'
'ယု ရယ် ယု စောက်ဖုတ်လေး လိုးရတာ အရမ်းကောင်းတယ် အာ့ အာ့
မောင့်လီးကြီးနဲ့ လိုးနေပီနော် အားး အူးးး အမယ်လေးကောင်းလိုက်တာ ယုရယ်'
ယု ရင်တွေမောပီး အတင်းကို လက်ခလယ်နဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကို သူ အတင်းနှိုက် ပစ်လိုက်တယ် သူလည်း ပီးသွားပီဖြစ်တယ်
'အားးး ကောင်းလိုက်တာ ယုရယ် ဟူးး
စိတ်မှန်းနဲ့တောင် အဲ့လောက်ကောင်းနေတာ တကယ်များလိုးလိုက်ရရင်ကွာ'
'မောင် လိုးချင်ရင် ပြောလိုက်မယ်လေ'
ဟိုဘက်လေးလှည့်ကွေးနေတဲ့ ယုရဲ့ ရှေ့ဘက်ကို ဇင်သွားလိုက်တယ်
မောင်က နောက်ကနေ တစောင်းပဲ ကော့နေတဲ့ ယုဖင်ကို ကွက်တိချိန်ထားတယ်
စောင်လေးကို ဇင် အသာမလိုက်တယ် ချွေးတွေစို့မောဟိုက်နေတဲ့ ယုမျက်နှာလေးကို သေချာကြည့်ပီး Kissingဆွဲလိုက်တယ်
'ဟင်းး ဟင်းး '
ယု မရုန်းပဲ ဖင်ကတော့ နောက်ပိုကော့သွားတယ်
နောက်ကွက်တိ ချိန်ထားတဲ့ မောင့်လီးက ယု အဖုတ်ကို ကွက်တိထောက်မိတယ်
ယု မျက်လုံးလေး ဖွင့်ကြည့်တော့ ဇင်လည်း နမ်းနေတာ ခနနားပီး
ပြုံးကြည့်ရင်း 'ယု စိတ်ထနေပီ မလားဟင် ယုဘဲနဲ့ လိုးကြတဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင် လိုးထားကြရအောင်နော်'
'ဟင့် အင်း ဇင် ငါကြောက်တယ်'
ဇင် စောင်ကို ဖယ်လိုက်တယ် ယုရဲ့ အဝတ်စားတွေပါ ချွတ်ပေးရင်း နို့တွေစို့ပေးလိုက်တယ်
မောင်ကလည်း ယု ကျောပြင်နဲ့တင်ပါးလေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တယ်
မောင် လက်ညှိုးလေးနဲ့ အဖုတ်လေးကို နှိုက်လိုက်တယ်
'ဟင့် ဟင်းးး '
ဇင်က စောက်စိလေးကို ရှေ့က ဖိချေ ပွတ်ပေးရင်း နို့စိုနေတယ်
မောင်က ယု ဂုတ်သားလေးတွေကို ဖွဖွလေး နမ်းရှုံ့ပေးနေတယ်
'ယု မောင်လိုးတာ ခံချင်နေပီလား ဟင်'
မောင် နားနားကပ်မေးလိုက်တော့ 'ဟင့် အင်းး မောင့် သဘော'
'ကဲ ဇင် စမယ်လေ'
ဇင် ယုကို ပက်လက်လေးလှန်ပီး ပေါင်ကား လိုက်တယ်
အမွှေးကျဲကျဲနဲ့ အဖုတ်လေးက စိစိလေး စောက်စိကတော့ ကော့နေသလိုပါပဲ
ဇင် ယု အဖုတ်လေးကို လျှာနဲ့ယက်ပစ်ပေးလိုက်တယ်
'အားး အင်းးး ဟင်းား ဟင့်'
မောင် ယုနို့တွေ စို့ပေးနေပါတယိ်
ဇင်က ယု အဖုတ်ကို ယက်နေရင်း မောင့်လီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်တယ်
'မောင် လိုးတော့ '
ပီးတော့ ယုဘေးထိုင်ပီး ဗိုက်သားလေးတွေပွတ်ပေးပီး ယု အဖုတ်လေးကို ဖြဲပေးလိုက်တယ်
မောင် လီးနဲ့တေ့လိုက်တယ် ဒစ်မြုပ်အောင် အရင်သွင်းဖို့ကြိုးစားရမှာလေ
'ယု မောင့်လီးကို လှမ်းကြည့်ပါအုံး'
'ဟင့် ကြောက်တယ် '
'အင့် အမေ့ နာတယ်'
အငိုက် ထိုးသွင်းလိုက်လို့ အော်သံထွက်လာတာကို ဇင် အချိန်မှီ kissingဆွဲလိုက်တယ် လက်တဖက်ကလည်း အစိလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ်
'ဖလူးး ဘူးး အင့် အင်းးး'
ခနပါပဲ ယု အာရုံက နာတာ ခနပဲခံစားလိုက်ရတယ်
ကြပ်တုပ်နေတဲ့ ယု စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းထဲကို မောင့်လီးကြီး အဆုံးထိဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်
'အားး အင့် မောင် မောင်ရယ် '
'ယု ယု မောင်လီးနဲ့ ယု စောက်ဖုတ်ကို လိုးရတာ အရမ်းကောင်းတာပဲ ယုရယ် ကောင်းလား '
'ဟင့် ကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းတယ် လိုးပါ ဇင် နင့်ဘဲ လီးကြီး ငါ့စောက်ဖုတ်ကို လိုးနေတာ နင် သဝန်မတိုဘူး လား ငါကတော့ အလိုးခံလို့ကောင်းနေပီ'
'နင့်ကို လိုးနေတာ ကြည့်ပီး ငါ Feelတတ်နေတယ် ကောင်မရဲ့'
'အားး လားးလား အမေရေ ကောင်းလိုက်တာ မောင့် လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံနေရတာ ကောင်းလိုက်တာ အားး အင့် အင့် '
အရမ်းထန်ပီး အော်နေတဲ့ ယုကို မောင် မညှာမတာ လိုးပစ်လိုက်ပါတယ်
'အူးး အမယ်လေး ယုလေးရယ် အရမ်းလိုးလို့ကောင်းတာပဲ'
ဇင်လည်း မနေနိင်တော့ပါဘူး မတ်တပ်ထရပ်ပီး မောင့်မျက်နှာကို စောက်ဖုတ်နဲ့ ပွတ်ပစ်လိုက်တယ်
ထုံးစံအတိုင်း ၃ဦးစလုံး တပြိုင်တည်း ပီးသွားကြတယ်
ယုတို့အတွဲတွေ့တဲ့အခါ မောင်မောင်နဲ့ဇင်ဇင်လည်း ဇင်ဇင့်အခန်းပြန်ခဲ့ကြတယ်
'မောင် ဇင်လည်း ယုဘဲနဲ့လိုးချင်တယ်ဆို မောင် လက်ခံမှာလား'
'အာ တော်ပါ လက်မခံဘူး လုံးဝပဲ'
'မောင်က အကျင့်ပုပ်တာ သူကျ ဇင့်သူငယ်ချင်းမတွေကို လိုးပီး မတရားဘူး'
'အဲ့ဒါ ဇင်ခွင်ပြုလို့လေ' 'ဟုတ်ပါပီ ဇင်က မောင့်ကိုစတာပါ ဇင်က မောင့်တစ်ယောက်တည်းပဲ အလိုးခံချင်တာပါ တခြားဘဲတွေ စိတ်ထဲကိုမရှိပါဘူး' 'ဒါမှ ငါ့မိန်းမလေးကွ'
'မောင်ရေ အာပြိုကြီးတယောက်တွေ့ထားတယ် မောင်ရေ Fbကပဲ
၃၀ကျော် ရင်မောက် ဖင်ကောက် မျက်နှာထားလေးကလည်း ချိုတယ် မောင့်အကြိုက်ပဲ'
'ဇင်ကတော့ လုပ်ပီ '
'ဘာလဲ မောင်က မကြိုက်ဘူးလား'
'ဟီး ဇင်ရယ် ဇင့်သဘော'
'ဟွင်း မပြောလိုက်ချင်ဘူးနော် ဇင်နဲ့တော်ကီညှပ်နေပီ မောင်ရဲ့
ဆော်ကြီးက ယဉ်တယ် ရိုးတယ် စိတ်က ဆာလာလို့ သူမရှက်ပဲဖွငိ့ပြောတာ
ဇင် မောင့်အကောင့်နဲ့ သူ့ကို Qနေတာ သူပျော်နေတယ်'
'ဘယ်အခြေအနေရောက်ပီလဲ Sexchatပေါ့မောင်ရယ် မောင့် လီးပုံတွေပြထားတယ် သူ့ဖက်ကတော့ နို့ပဲပြသေးတယ်'
'လာ မမချော ဇင့်အခန်းကို သဘောကျမှာပါ မောင်ရေ ရေချိုးတာ မပီးသေးဘူးလား ဒီမှာ မမချောရောက်နေပီ'
'ဟုတ်ဘူး မမ ဇင့်သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ဇင်နဲ့နေတာ သူငယ်ချင်းက ခရီးထွက်သွားတုန်း မောင်ကလာနေတာ'
'အမယ်လေး ငယ်လို့သာတော်တော့ အတတ်တွေကတော့ စုံလိုပါ'
'ဒါတောင်စာတွေ့ပဲရှိသေးတယ် လက်တွေ့မမ မကြာခင်တွေ့ရပါ့မယ် ဟီဟီ'
ဇင် မချောကို မျက်နှာချင်းဆိုင် သေချာစိုက်ကြည့်ပီး ခါးကိုဖက် Kissဆွဲလိုက်တယ်
လက်တွေကလည်း အင်္ကျီကို ချွတ်ပေးလိုက်တယ် ပီးတော့ ထဘီကိုပါချွတ်ချပေးလိုက်တယ်
ဘော်လီနဲ့အောက်က အတွင်းခံလေးသာပါတော့တဲ့ မချော တကိုယ်လုံးကို သေချာကြည့်ပီး 'မမရယ် မမတကိုယ်လုံးက ဇင့်ထက် အကုန်၂ဆရှိတယ် မောင့်အကြိုက်ပဲ'
'ဟင်း ဟင့် မြှောက်မနေနဲ့ ဇင်လည်းပြပါအုံး'
ဇင် အပေါ်တီရှပ်ကို ချွတ်လိုက်တယ် ဘော်လီ ဝတ်မထားတဲ့ ဇင့် နို့အုံနှစ်လုံးကို မချောတွေ့လိုက်ပီး 'ဇင်လည်း မခေပါဘူး လာ မမအလှည့်'
မချော ဇင့်ကို ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲလိုကိပီး ဇင့်နို့၂လူံးကို တလှည့်စီ နယ်ပေး ညှစ်ပေးရင်း စို့နေတယ်။ဇင်လည်း ခြေ၂ချောင်းက မချောခါးကို ချိတ် ပီးတော့ ခြေထောက်နဲ့ မချော အတွင်းခံကို ချွတ်ပေးပီး ပေါင်ကြားကို ခြေသလုံးနဲ့ပွတ်ပေးနေလိုက်တယ်
ကုတင်စောင်းမှာ ပက်လက် လှန်ပီး လှဲနေတဲ့ ဇင်ဇင့် နို့တွေကို ကုတင်အောက်ကနေ စို့နေရင်း မချော သူ့ဘာသာသူ့ဘော်လီကိုချွတ် ဇင့် ဘောင်းဘီးကိုလည်းချွတ် ဖင်လေးကုန်း နို့စို့ပေးနေတာကို နောက်ကနေ မောင်မောင် ငေးကြည့်နေရင်း လီးကတောင်လာပါပီ
ဇင်လှမ်းမြင်နေရပေမယ့် မချောကတော့ သတိမထားမိပါဘူး ဂွကြားက ဇင့် ပေါင်နဲ့ခြေသလုံးကို သူမ အဖုတ်နဲ့ဖိပွတ် ပါးစပ်ကလည်း ဇင့်နို့တွေစို့ရင်း Feelတတ်နေပါတယ်
'မမချော ခုချိန် မမအနောက်ကနေ မမချော အဖုတ်ကို မောင်က လီးနဲ့ လာလိုးရင် မမချော ဘယ်လိုနေမလဲ'
'အကောင်းဆုံးပေါ့ ဇင်ရယ် မမချော အဖုတ်က ယွနေပီ ဓာတ်ပုံထဲမှာပဲ မြင်ဘူးတဲ့ မောင်မောင့်လီးနဲ့ အလိူးခံချင်လှပါပီ ဇင်ရယ်'
'ခနစောင့်ပါ မမချောရယ် မလောပါနဲ့'
ဇင်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ခြေမနဲ့ မချော အဖုတ်ကို ထိူးမွှေလိုက်တယ်
'အင့် ဟင်း ဟင်း '
မမချော Feelတတ်ပီး ဇင့်နို့တွေကို အတင်းစို့ပီး လက်တဖက်ကလည်း ဇင့် အဖုတ်ကို ပွတ်နှိုက်နေတယ်
ဇင် မောင့်ကို မျက်စပစ် အချက်ပေးလိုက်တယ်
မောင်မောင် အနောက်ကနေ အသာလေး ဖင်ကုန်းပီး နို့စို့နေတဲ့မချော ဖင်နှခြမ်းကို လက်နဲ့သေချာဖြဲပီး အဖုတ်ထဲ သူ့လီး ဇွပ်ကနဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ဖင်၂ခြမ်းကို လက်နဲ့ထိကတည်းက သတိထားမိပေမယ့် လှုပ်ရှားမှုတွေက မြန်ဆန်လွန်းတော့ မချော Feelက ဘယ်ကစတတ်လိုက်မှန်းကို သတိမထားမိပါဘူး။
'အင့် အင့် ဖျောင်း ဖျောင်းးး '
မောင်မောင် မချောအနောက်ကနေ မချောနို့တွေကိုလည်း ချေပေးရင်း အတင်းစောင့်လိုးနေပါတယ်
'မမချော ကောင်းလား ဇင့် မောင် လီးကြီးနဲ့ မမချော အဖုတ်ကို အနောက်နေ အတင်းလိုးနေတာ လှည့်ကြည့်လိုက်ပါအုံး
မမချော မို့ အရင်ပေးလိုးတာနော် အရင်ကဆို ဇင့်ကို အားရအောင်လိုးပီးမှ တခြားမိန်းမကို လိုးခိုင်းတာ'
'အင်းပါ ဇင်ရယ် ဇင် ဘဲဘဲလီးကြီးက မမအဖုတ်ထဲပြည့်ကြပ်နေတာပဲ ခံလိုးကောင်းလိုက်တာ အင့် ဟင်း အမယ်လေး မောင်လေးရယ် လိူးစမ်းပါ'
မမချော ဖီးတတ်ပီး နောက်ကလိုးနေတဲ့ မောင်မောင့်ကို လှည့်ကြည့်ပီး အားမလို အားမရပြန်ပြောနေပါတယ်
မောင်မောင်လည်း လီးတချောင်းလုံးပြန်ထုတ်လိုက် အဆုံးလိုက် ထိုးချလိုက်နဲ့ အတင်းဖိလိုးပေးလိုက်တယ်
'ဟူးးး ကောင်းလိုက်တာ မချောရာ အဖုတ်ကြီးက စီးပီး မောင့်လီးတချောင်းလုံးကိူ စုပ်ညှစ်ထားတယ် အင့် အင့် ဖျောင်း ဖျောင်း ဖြန်းး ဖြန်း'
'ကောင်းတယ် ဟုတ်တယ် အဲ့လို နာနာလိုး အရမ်းကောင်းတယ်'
မောင်မောင်လည်းလိုးရတာ အားသိပ်မရဖြစ်ပီး ကြမ်းချင်တာနဲ့ မချောလက်၂ဖက်ကို နောက်ပြန်ဆွဲယူလိုက်တယ် တံတောင်ဆစ်၂ဖက်ကို သေချာဆွဲကိုင်ပီး အနောက်ကနေ စောင့်စောင့်လိုးလိုက်တယ်
'အမယ်လေးးးလေး မောင်လေးရယ် ဘယ်လိုများ လိုးလိုက်တာလဲ ကောင်းလိုက်တာ ဖလူးး ဖလူး'
အစပိုင်း မောင်မောင်က မချောကို တံတောင်ဆစ်ကနေ ဆွဲလိုးတော့ မချော ဖင်ကောက်ပီး ခေါင်းမော့ အလိုးခံနေရင်း မောင်မောင် အတင်းစောင့်လိုးပီး မချောကို ခေါင်းငုံ့စေလိုက်တယ်
မချောတံတောင်ဆစ်ကိုကိုင်ပီးမချောကို လိုသလုံးပုံသွင်း လိုးနေလိုက်တယ်
ခေါင်းငုံသွားတော့ အောက်က ရှေ့က ပေါင်ကားထားတဲ့ ဇင် အဖုတိကို မျက်နှာနဲ့ အပ်မိတယ်
'မချောရယ် ဇင့်အဖုတ်ကို ယက်ပေး မောင်လိုးတာခံရင်း ဇင့်အဖုတ်ကို ယက်'
'အင်းး ပလပ် ပလပ် အင့် ဟင်းး ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်'
ဇင် အားမရတာနဲ့ မချော ခေါင်းကို သေချာ လက်၂ဖက်နဲ့ထိန်းပီး သူ့အဖုတ်နဲ့အတင်းဆွဲပွတ်လိုက်တယ်
မောင်မောင်ကလည်း အရှိန်တင်ပီး အတင်းကို စောင့်ပီး ဖိလိူးချရင်း မချောကို ကာမဂုဏ်အရသာအပြည့်ပေးနေပါတော့တယ်
ပြီးပါပြီ ဆက်ရန်မရှိတော့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါသည်
မောင်မောင် သူ့လက်ရှိဆော်လေး ဇင်ဇင်နဲ့ ၄ကြိမ်လောက်
မောင်မောင်က ထန်တယ် ဇင်ဇင်ကလည်း အကြမ်းခံနိုင်တယ်။
ဇင်ဇင်က သူနဲ့မောင်မောင် ကိစ္စကို သူ့သူငယ်ချင်းမ
မောင်မောင်နဲ့ သူနဲ့ လိုးပွဲအကြောင်းကို ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့နဲ့ မိုးမိုးကို ပြောပြတတ်တာ သူ့ဝါသနာ။
ယင်ဖိုတောင် မသမ်းဘူးတဲ့ မိုးမိုးတယောက်တော့
ဇင်ဇင်ပြောသမျှတွေကို နားထောင်ပီး အရည်ရွှဲ ဖီးလ်နေရရှာတယ်
"မိုးရယ် ငါ့မောင် လီးကြီးက တနေ့တခြားကြီးကြီး လာတယ်ဟာ
ငါလည်း မောင့်လီးကို စွဲနေတာဟ ဟိုနေ့ကဆို
ငါ့ဖင်ကိုထောင်ခွေးလိုးလိုးတာဟာ ငါဖီးတွေအရမ်းတတ်ပီး ဆောက်ရည်တွေတောက်တောက်ကျကုန်တယ်ဟေ့ မောင့်လီးကြီးနဲ့ ငါ့ဆောက်ဖုတ်ကြီးကတော့ ခွဲမရတော့ဘူးဟယ်"
"ဇင်ရာ နင်ကလည်း ဒါတွေပဲပြောပြပြနေတယ် ပြောလိုက်ရင်လည်းတစ်တစ်ခွခွကြီး"
"မိုးရယ် ငါ အလိုးခံရတာကောင်းကြောင်းညည်းကိုသိစေချင်လို့ပါဟာ နင်ကလည်း ကိုယ့်အဖုတ်တောင် ကိုယ်မနှိုက်ဘူးမလား နင်လူဖြစ်ရကျိုးမနပ်လိုက်တာဟာ"
"ဟာ ဇင်နော် "
"ဇင်နော် မနေနဲ့ နင် ငါနဲ့မောင်လိုးတာတွေကြားတော့ နင် ဖီလင်ဘာလေးမလာဘူးလား"
တကယ်တော့ မိုးမိုးဆောက်ရည်တွေက ခုကိုရွှဲနေပီ
"ရှက်မနေနဲ့ ငါ့မောင်လီးပုံ ညည်းကိုပြအုံးမယ်
သူတို့ အသက်တွေက ၂၀တော့ရှိနေကြပီ။
ဟုတ်တယ် မိုးမိုး လီးကို ခုထိမမြင်ဘူးသေး။
သူမ မောင်မောင့်ကို မသိမသာ စွဲလမ်းနေမိတယ်။
သူတို့အတွဲချိန်းတွေ့ရင် သူပါတဲ့ခါတွေဆိုသူတို့အတွဲက ပိုကဲတယ်
ဇင်ဇင်က မောင်မောင့် ဂွကြားကို ခနခန ပွတ်လိုက် ပုတ်လိုက်ရိုက်နဲ့
မိုးမိုးကို တမင်တကာ လိုက်လိုက်စတယ်။
"မိုးရယ် ငါ့မောင် ငါ့ဆောက်ဖုတ်ကြီးကို နှိုက်ပေးနိုင်စွမ်းကတော့ရှယ်ပဲဟ ငါ့ဘာသာငါနှိုက်တာထက်များကြီးသာတယ်
မိုး နင်ဘာသာနင်မနှိုက်ရင် ငါ့မောင်ကို နင့်ဆောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်ခိုင်းပစ်မယ် "
"ဟာ တော်ပီ ဇင်ရာ"
မိုးမိုး ဇင့် အခန်းထဲက ထွက်သွားပီး သူ့အခန်းသူသွားလိုက်တယ်"
သူတို့ မိန်းကလေး၂ယောက်တည်း တိုက်ခန်းငှားနေပီး ကျောင်းတတ်နေကြတာ။
မိုးမိုး အခန်းထဲရောက်တော့ ဇင်ဇင်ပြောစကားတွေပြန်ကြားနေမိပီး
"ဟင်းး ဟင်း မောင်မောင်ရယ် အဟင့် ဟင့် အီး"
မိုးမိုး သူကိုယ်သူ ဘာဖြစ်နေမှနိးမသိတော့ပါဘူး
သူ့လက်က သူ့တခါမှ မနှိုကိဘူး မပွတ်ဘူးတဲ့ သူမအဖုတ်ကို သူပြန်ပွတ်နေ နှိုက်နေရင်း မောင်မောင်က သူ့ကို နှိုက်ပေးနေသလိုစိတ်တွေထန်နေပီး ညည်းသံတွေပါ ထွက်နေရှာတယ်
သူ့အစိလေကို ထိမိရင်း သူ့လက်ကို သူမခွာချင်တော့ပဲ အတင်းဖိပွတ်နေတယ် ဆောက်ရည်တွေရွှဲနစ်နေပီး သူမအရမ်းကောင်းနေရှာတယ်
ခနနေတော့ သူမ ပီးသွားရှာတယ်
"ဟိတ် မောင်မောင် မောင်မောင်နဲ့ ဘာဖြစ်နေတာလဲ မိုး"
အခန်းတခါးဝကို ဘယ်ချိန်ကတည်းကရောက်နေမှန်းမသိတဲ့ ဇင်
မိုး စကပ်လှန် အတွင်းခံပေါင်ကပ်ပီး အားရပါးရ အဖုတ်ပွတ်နေတာ အစအဆုံးမြင်သွားပီလေ
"အီး ဟီး ရှက်လိုက် ဇင်ရာ ငါ့စိတ်တွေ ဘာဖြစ်မှန်းကို ငါမသိလိုက်ဘူး"
"ငိုစရာလား မိုးရယ် ငိုနဲ့တိတ်တိတ် သဘာဝပဲ
မိုးကို ဇင်က ဒီထက် အရသာရှိတဲ့ ဖီးတွေရစေချင်သေးတယ် သိလား
"မသိမလုပ်နဲ့ ဒီမှာကြည့်"ဆိုပီး ဇင် သူ့ဖုန်းထဲကနေ သူနဲ့မောင်မောင် Sex chatထားတာတွေ မောင်မောင့် လီးပုံတွေ မိုးကို ပြလိုက်တယ်။
မိုး ရင်တွေတုန် ခုန် ပီး အဖုတ်လေးပါ ထပ်ယွသွားပီး မောင်မောင့်လီးပုံကြီးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေမိတယ်
"ဇင် မောင်မောင့်ဟာကြီးနဲ့ နင့်ဟာလေးက ဆန့်ရဲ့လား"
"ကျပ်တော့ ကျပ်တုန်းပဲ ကောင်မ နင်ခံကြညိ့ချင်နေပီလား"
"ငါ ငါ မသိတော့ဘူးဟာ"
"ရှက်မနေနဲ့ မောင်က နင့်ဖင်ကိုကြည့်ပီး သဘောကျနေတာဟ"
"တကယ် သူ နင့်ကို လုပ်ချင်နေတာ ငါသိတယ် ငါ မောင်နဲ့နင့်ကို လိုးစေချင်တယ်"
ပြောပြောဆိုဆို ဇင်ဇင် မိုးမိုးအဖုတ်ကို ပွတ်သပ်ပေးတယ်
"အား အင်းး အီး မောင်ရယ် လိုးစမ်းပါ ဇင့် အဖုတ်ကွဲပြဲသွားအောင် လိုးပစ်စမ်း"
မိဇင်နဲ့မောင်မောင် မိဇင်အခန်းမှာ လိုးပွဲကျင်းပနေကြတဲ့အသံတွေပါ
တမင်တကာ အခန်းတခါးမပိတ်ပဲနဲ့ မိုးကိုမြူစွယ်နေကြတာပါ
မိုး အဖုတ် အရည်တွေရွှဲနစ်နေလှပါပီ
မနေနိုင်တော့ဘူး အသံနဲ့တင် အားမရတော့ဘူး
မောင်မောင် နဲ့ ဇင်ဇင် ချွေးသံရွှဲရွှဲနဲ့ အပြိုင်အဆိုင်လိုးနေကြလေရဲ့
"ပီးပီ မောင် ဇင်ပီးပီ တော်တော့နော်"
"ဇင်ရာ မောင်က ခုမှ လိုးကောင်းတုန်း"
"မောင်ရယ် ဇင်မခံနိုင်တော့လို့ပါ မောင် လိုးချင်သေးရင် မိုးကို လိုး
အခန်းဝက မိုး ဝင်လာခဲ့ပါရှင်"
မိုး ဆေးမိထားသလိုပဲ အခန်းထဲက ကုတင်ဆီလျှောက်လာခဲ့တယ်
"လေးဘက်ထောက် ကုန်းချင်တယ် မောင်က နောက်က အားရပါးရလုပ်ပေး"
အပျိုစင်လေးတယောက်ဆီက အဲ့လို စကားသံတွေကြားမယ်လို့ မောင်မောင် ထင်မထား
"ကုန်းဟာ" ဆိုပီး မောင်မောင် မိုးကို ကုတင်ခြေရင်းကို လက်ထောက်ခိုင်းပီး ဂါဝန်လှန်က ဖင်ဖြူဖြူလေးကို လက်နဲ့ဖြဲပီး ပြူးထွက်လာတဲ့ မိုး အဖုတ်လေးကို သေချာကြည့်ပီး သူ့လီးနဲ့ထိုးချလိုက်တယ်
"အားးးအားး အမယ်လေး သေပါပီ နာတယ် တော်ပီ တော်ပီ"
မိုးအော်သံက အကျယ်ကြီး နောက်ပီး အတင်းရုန်းတယ်
ဇင် ချက်ချင်းထပီး မိုး လက်ကို ချုပ်တယ်
မောင်မောင်ကလည်း ညှာမှာ မဟုတ်ဘူး
ဇင်က ဒါကိုသိတယ် မိုး မခံနိုင်လည်း ဂရုမစိုက် သူ့မောင် ကောင်းဖို့အဓိကပဲ
"လိုး မောင် လိုး မိုး စောက်ဖုတ်က မောင့်အတွက်ပဲ မောင် အားရအောင်လိုး မိုးကလည်း မောင့်လီးနဲ့အလိုးခံချင်နေတာ"
"ဇင်ရယ် မလုပ်ပါနဲ့ မောင် မလုပ်ပါနဲ့တော့ မိုး မခံနိုင်ဘူး"
မောင်မောင်က ဇင်ဇင့်စကားပဲ နားထောင်တယ်
"မိုးရယ် ခနနေကောင်းသွားမှာပါ "
မောင်မောင် အတင်း မိုးကို ဆောင့်လိုးပစ်နေတယ်
"အား အားး နာလိုက်တာ နာပီး စိတ်ထဲကောင်းနေသလိုပဲ
မောင် လိုးပါ လိုးပါ ရပီ"
ဒါပေမယ့် ညည်းနေတုန်း အော်နေတုန်းပဲ
မောင်မောင်လည်း အားရနေပီ အသံတွေလည်း ထွက်ညည်းနေတယ်
ဇင်ဇင်လည်း မရတော့ဘူး မိုး မျက်နှာရှေ့ ပေါင်၂ခြမ်းဖြဲပီး နေရာယူပီး မိုးခေါင်းကို သေချာကိုင်ကာ မိုး နှုတ်ခမ်း မိုးမျက်နှာ တပြင်လုံးကို
စောက်ဖုတ်နံ့နံဟောင်နေပေမယ့် မိုး မလွှဲသာတဲ့အပြင် လျှာထုတ်ပီးပါ ဇင့် အဖုတ်ကို ယက်မိရင်း နောက်က မောင်မောင် လိုးတာကို အရသာခံနေလိုက်တယ်
ခနအကြာ ၃ယောက်လုံး တပြိုင်တည်း ပီးသွားကြတယ်ဆိုရင်
ဇင် နဲ့ မောင်ကတော့ ဆွဲမြဲဆွဲဆဲပဲ
မိုးမရှိတော့ ဇင့် အခန်းမှာဆွဲဖြစ်တယ်
'မောင် မိုးကို လွမ်းနေတာလား'
'လွမ်းတယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး သတိရနေတာ'
'ဟွင်း မောင် ဇင့် သူငယ်ချင်း ရွှေမိကို သိတယ်မလား'
'အင်း သိတယ်လေ Sexyကျကျနဲ့ Zero ကွာတားတွေပဲဝတ်တဲ့တယောက်မလား'
'ဟုတ်တယ် မောင် သူက ဘဲပွေတယ် နှာလည်း ထတယ် မောင်
'ဇင်ရော မောင်ကတော့ ဇင့်သဘော'
'အမယ်လေး မူနေပြန်ပါပီ ရွှေမိက Sex chatတာ ဝါသနာအိုး မောင်ရေ'
'ဟုတ်လား ဇင်က ဘယ်လိုသိတာလဲ'
'သူပြောပြတာလေ မောင် Chat မလား'
Viberကနေ မောင်နဲ့ဇင် ရွှေမိကို စကားစတွေပျိုးပီး
Sex chatဖို့ စလိုက်တယ်
'hi Sexy '
'မ whatပါနဲ့ ချစ်ချင်လို့'
'ဘာမှ ဝတ်မထားဘူး အဆင်သင့်ပဲ'
'ရယ်ဒီပဲလား video callလိုက်မယ်နော်'
ရွှေမိ ပေါင်ဖြဲကားထားပီး အဖုတ်ကို အတုနဲ့ကလိနေပါတယ်
'မောင် လား ကိုလား ဘယ်သူလဲ ရွှေကို့လိုးနေတာ ဘယ်သူလဲဟင် ဟင့် အင်း'
'မောင်ပါ ရွှေရယ် မောင့်လီးကို ကြည့်ပါအူံး'
'အယ် အကြီးကြီး အရှည်ကြီးပါလား'
'ထုပြပါ မောင် မောင့်လီးကိုကြည့်ရင်း ရွှေလည်း အတုနဲ့လိုးမယ်'
'အင်း ရွှေရယ် ကောင်းလိုက်တာ'
'မောင်ရယ် အတုကြီးက မောင့် လီးသာ ဖြစ်လိုက်ပါတော့ အင်း အင့်
ရွှေမိ အတုကို အောက်ချပီး တက်စောင့်လိုက်ပါတယ်
'ကောင်းလိုက်တာ မောင်ရယ်'ဆိုပီး ခနအကြာ ရွှေမိပီးသွားပါတယ်
'ရွှေ မောင် မပီးသေးဘူး မောင့်ဘေးမှာ မောင့် ဆော်ရှိတယ်
'ဟင် မောင် ဆော်ရှိရဲ့သားနဲ့ ရွှေနဲ့ ဘာလို့လာchatတာလဲ'
'မောင့် ဆော်ကိုယ်တိုင်က chatခိုင်းတာပါ ရွှေ့ကို မောင်နဲ့မောင်ဆော်နဲ့ လိုးပြမယ်နော်'
'ရင်ခုန်လိုက်တာ မောင်ရယ် ပြ ပြ လိုးပြ'
'ကဲ ဇင်လာတော့ '
မောင် ဖုန်းကို သေချာလေး ထောင်ပီး ဇင့်ကိုလည်း နေရာချပေးလိုက်တယ်
ရွှေ ဖုန်းထဲကတဆင့် သူတို့အတွဲကို ဘေးတိုက်မြင်နေရတယ်
ဇင် မောင့် အပေါ်ကနေ တက်စောင့်လိုက်ပါတယ်
တော်တော်ယွနေပီ ဖြစ်လို့ အကြမ်းဗတမ်းကို စောင့်ပါတယ်
ရွှေမိ ရင်တုန် ပမ်းတုန်နဲ့ ကြည့်နေပီး အတုနဲ့ အဆက်မပြတ် လိုးနေမိတယ်
'ဇင် ရွှေ့ကို မျက်နှာလေးပါ ပြလိုက်ရအောင်'
'ဟာ ဇင်ဇင် '
'အေး ဟုတ်တယ် မအံသြနဲ့ ဘယ်လိုလဲ ငါ့ဘဲ လီးကို သဘောကျလား'
'အေး ဟာ နင့် ဘဲ တော်တော် လိုးနိုင်တာပဲ'
'မောင် ဇင့်ကို ရွှေ့လိုသဘောထားပီး ရွှေ့ကို လိုးပြလိုက်ပါအုံးမောင်ရယ်'
'ကဲ ရွှေ ဖင်ကုန်း'ဆိုပီး ဇင့်ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းက မောင် ကင်မရာဘက် တချက် လှည့်ကြည့်ပီး 'ရွှေ ရွှေ့ကို လိုးတော့မယ်နော်'
'ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်းးး '
'အမယ်လေး မောင်ရယ် ဖြေးဖြေးလိုးပါ'
'အင်းပါ ရွှေရယ် ရွှေ့ဖင် ၂ခြမ်းဖြဲပီး ရွှေ့အဖုတ်ကို လိုးရတာ အားရလွန်းလို့ပါ'
ရွှေမိ အောကား ကြည့်နေရသလိုပဲ ခံစားမိပီး
မင်းသားကသူ့ကို လိုးနေတဲ့ဟန်ဆိုတော့ သူက မင်းသမီးလို ခံစားမိပီး
'ရွှေရယ် အရမ်းကောင်းတယ် ရွှေ့ကို လိုးရတာ feelပဲ'
'လိုး မောင် အားရပါးရလိုး 'ဆိုပီး ရွှေမိ အော်ပြောမိကာ လက်ကလည်း အတုနဲ့ အဖုတ်ထဲ ထရပ်ကြမ်းထိုးထည့် လိုးနေမိတယ်
'အား အမယ်လေး ကောင်းလိုက်တာ'
'ကဲ ရွှေ ကိုယ်တို့ အခန်းအလည်လာဖို့ ဖိတ်ပါတယ် နော်'
င ရဲ ကြီးတာ မ မသိ တယ်
င ရဲ ကြီးတာ မ မ သိ တယ်
ကမာ၇ွတ်မှာ နှစ်ခါ တွတ်တဲ့ ဗမာငချွတ် ရေးသည်
ဒီနေ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း နေ့လည် ထမင်းစားချိန်မှာ အပြင်ထွက်မစား .. ။ ပြီးခဲ့သော နှစ်ရက်လောက် မှာ ပွဲဆက်တွေ များခဲ့ ပြီး အစားတွေ မဆင်ခြင်ခဲ့ ။ ပြန်လျော့ရမည် ..။ မနက် က ထည့်ခဲ့တဲ့ သင်္ဘောသီး နဲ့ စပျစ်သီး ဘဲ ဆာမှ စားတော့မည် လို့ စဉ်းစားထားသည် ။
( သက်သက် . .နင့်ကို . .ခင်ချိုအုံး ပြောပြတဲ့ ငရဲအကြောင်း ဆိုတာ ပြောပြပါအုံး . .) ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သူမ ရုံးခန်း အပြင်ဘက် မှာ ထမင်းဘူး ထိုင်စားနေကြတဲ့ စာရေးမလေး နှစ်ယောက် စကားသံကို ကြားလိုက်ရ သည် . .။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရုံးခန်းထဲမှာ ရှိနေတာကို မသိကြဘူး . .။ အင်းလေ . .သူမ သည် နေ့တိုင်း နေ့လည်စာ ကို အပြင်မှာ ထွက်စားတတ်တာကိုး . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းတို့ ရုံး ရဲ့ အနီးအနား မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေ က စုံလှ သည် .. ။ ငရဲအကြောင်း ဆလို့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း စိတ်ဝင်စားသွားသည် ။ ဖတ်လက်စ အီးမေးလ် ကို ဆက် မဖတ်ဘဲ နား စွင့်ထားမိ သည် . ။ ငရဲ ဆိုတဲ့ ကောင်လေး က
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တို့ ရုံး က ယာဉ်မောင်း ပါ . .။ ငရဲ ရဲ့ ပုံစံ က ခပ်မိုက်မိုက် လေး .. ။ သူ့ အကြည့်တွေ ကလဲ ရဲတင်း သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လို ရာထူးကြီးတဲ့ အရာရှိမ ကိုတောင် သူ ကြည့်တဲ့ ပုံ က ပြီတီတီ နဲ့ . .။ သူမ ရဲ့
ရင်တွေ တင်တွေ ကို စူးစိုက်ကြည့်တာ ရဲတင်းလွန်း သည် . .။ အရမ်းဘဲ . .။ ဒီကောင်လေး ကြည့်ရတာ တကယ့် ဖိုက်တာလေး ပုံစံဘဲ . .။ လူနံပိန် ကျွဲဂျိုလိန်
ဆိုသလို ဒီလို ပိန်ကပ်ကပ် ကောင်လေးတွေ က လီးကြီးကြီးတွေနဲ့ အလိုးကောင်း နေတတ်တယ်ဆိုတာ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကြားဘူး သည် . .။
( အေးပါ ဆွေမ ရယ် . .ပြောမှာပေါ့ ...ဒီလိုဟဲ့. .ခင်ချိုအုံး ငရဲနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆန်းဒေး ပဲခူး သွားတုံး ..က ဟိုဟာ လုပ်ကြတယ်တဲ့ . . . . ခင်ချိုအုံး က ငါ့ကို သူ ငရဲနဲ့ လုပ်တဲ့ အကြောင်းတွေ ကို အသေးစိတ်ပြောပြတာ .ဟိဟိ.. )
(ဟယ် . .ပြောပါအုံးပြောပါအုံး..ဘာတွေ ပြောပြလဲ .. )
( ငရဲ...သူ့ကိုလုပ်တာ.......တအားကြိုက်တာတဲ့.......ငရဲဟာ..ကအကြီးကြီးဘဲတဲ့.. .
.တုတ်တုတ်...ရှည်ရှည်ကြီး တဲ့ . .ဟိဟိ ငရဲက လုပ်တာလဲ တော်တော် တော်တယ်တဲ့ . . )
သူမ ထင်ထားတာ မှန်နေသည် ….။ ငရဲ က လီးကြီး တဲ့ အကြောင်း ငရဲ ရဲ့ ရီးစား
ခင်ချိုအုံး.. ဆိုတဲ့မိန်းကလေး ဆီကနေ သက်နွယ်ဦး နဲ့ ဆွေမမခိုင် တို့ဆီ တောင် သတင်းပျံ့နေပြီ . .။ ငရဲ ။
သူ့ နံမည် အရင်း က ရဲမင်း ပါ . .။ သူငယ်ချင်းတွေ က ငရဲမင်း လို့ နောက်ပြောင်ပြီး ခေါ် ကြ သည် .. ။ ကာလရွေ့လျောလာတော့ သူ့ ကို ငရဲ လို့ လူတကာ က ခေါ်ကြတော့တာဘဲ . .။
သူ ကိုယ်တိုင်ကလဲ ငရဲဆိုတဲ့ နံမည် ကို နှစ်ခြိုက် သည် ..။ သူက ကိုယ်သူ ငရဲလို့ဘဲ သုံးနှုံး သည်။ ငယ်ငယ်ကထဲ က ရပ်ကွက်ထဲမှာ ထီကနဲဆို ငရဲ ဘဲ . .။ကျောင်းမှာလဲ ငရဲ ကို လူတိုင်း သိ သည် . ။ ကောင်းသော သိခြင်းတော့ မဟုတ်ဘူး ..။ လဆိူုးလေးအဖြစ် သိကြတာ .. ။ ငရဲရဲ့ မိဘတွေ သည် ငရဲကြောင့် အရှက်တကွဲ အကျိုးနဲ အမြဲ ဖြစ်ကြရ သည် . .။ ငရဲ သည် မိန်းမ နဲ့ ပတ်သက်ြပီး ငယ်ငယ်ကထဲ က နံမည်ပျက် သည် . ။ ကျောင်း
က မိန်းကလေး အိမ်သာကို ချောင်းလို့ ကျောင်းထုတ်ခံရတာ မိဘများ အလိုက်ကောင်းလို့ . .ကျောင်း ပြောင်း လိုက်ရတာ နဲ့ ပြီးသွား သည် . .။ ငယ်ငယ်ထဲ က ရီးစားထား သည် ..။ လူပျိုပေါက် အရွယ်မှာ ညဘက်ကြီး .သူ့ရီးစား ကောင်မလေး ရဲ့အိပ်ခန်းထဲ ..မိလို့ အမှုကြီး သွား သည် . .။ ဆယ်တန်း..သုံးခါကျသော..ငရဲသည်ကျောင်းဆက်မတက်တော့ဘဲ..အလုပ်ထွက်လုပ်သည် ။ ပထမဆုံး ငရဲ စာအုပ်ချုပ် လုပ်ငန်း တခု မှာ ၀င်လုပ် သည် . ။ မျက်နှာချိုပြီး ဖင်ပေါ့သော ငရဲ ကို . ပိုင်ရှင် က သဘောကျ သည် .. ။ ငရဲ ကို အားကိုးလာပြီး အလုပ်သမားတွေကို ..တာဝန်ယူ ကြီးကြပ်ရ တဲ့ စူပါဗိုင်ဆာ အဖြစ် တိုးမြှင့်ပေးလာ သည် . .။ သည်မှာတင်ဘဲ ငယ်ကျင့်မပျောက်ဘဲ ငရဲ ဇာတိပြလာ သည် ။ ပိုင်ရှင်သူဌေး ရဲ့ သမီး ရေချိုးတာ ကို ချောင်း သည် ..။ မိသွားတော့ အလုပ်ပြုတ်သွား သည် ..။ အမေဘက် က အမျိုးတွေ အဆက်ကြောင့် သည်ရုံးမှာ ယာဉ်မောင်း
အလုပ် ရ သည် . .။ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် မလိုက်ဘဲ အတွင်းလူ က ထောက်ခံလို့ ရတာ ဖြစ်သည် . ။
နောက်ကြောင်းရာဇ၀င် သာ လကိုလို့ကတော့ ငရဲမှာ က အမှုဟောင်းတွေက တပုံ ကြီး . ..။ သည်ရုံးရောက်တာ မကြာသေး ..ငရဲ ရီးစားရ သွား သည် ..။
မိန်းမ.၀ါသနာကြီးသော ငရဲ သည် ဖင်ကြီးကြီး နဲ့ ခင်ချိုအုံး ကို တွေ့သောအခါ အရမ်း သဘောကျ ပြီး..ခင်ချိုလွင့် ကို ချဉ်းကပ် လေတော့ သည် . .။ . .ခင်ချိုအုံး..သည် ရုံးအလုပ်နဲ့အပြင်အမြဲသွားရသော ကြောင့် .ရုံးကားမောင်းသော ငရဲနဲ့ အနေနီးစပ်တာကြောင့် ..မိန်းမများကိုကျအောင်.အပြောကောင်းတဲ့ ငရဲ နဲ့ ညိကြလေ သည် .. ။ ပဲခူး ကို ပစ်ကနစ် ထွက်ကြ ရင်း . .ငရဲနဲ့ ခင်ချိုအုန်း ခဏ လူကြားထဲက ပျောက်သွား သည် ..။ ငရဲ သည် အကိုင်အတွယ် ရဲ သည် . .။ ကြမ်း သည် ..။မိန်းမလိုး ကျွမ်း သည် .။ ခင်ချိုအုံး ကို သူ့ အသိတယောက် ရှိတဲ့ ဆိစက်တခု ကို ခေါ်သွား သည် . .။တနင်္ဂနွေနေ့မို့ ဆီစက် မှာ ဘယ်သူမှ မရှိ .. ။ ဂိုဒေါင်ကြီးထဲမှာ ဖြစ်သလို . ရအောင် လိုးလိုက် သည် . .။ ခင်ချိုအုံး သူ့ ကို ကြိုက်သွား သည် . .။ ဘူးတရာ ပိတ်လို့ရမယ် . ပါးစပ်တပေါက် ကို ပိတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲ သည် .. ။ ခင်ချိုအုံး ငရဲ ရဲ့ လီးကြီးတာ မြိုသိပ် မထားနိုင်ဘူး .. ။ တဆင့် . .တဆင့်နဲ့.ငရဲလီးကြီးတာ.ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တောင် သိနေပြီ .. ။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် သူက ရုံးကားကိုမောင်းသော ယာဉ်မောင်း တင်ထွန်းအောင်
သည် အလုပ်အမြဲနောက်ကျတာကြောင့် ..သူ့ကို အပြစ်ပေး အရေးယူရတာကြောင့် ယာဉ်မောင်း လိုလာတာမို့ငရဲ ကို သူ့ ယာဉ်မောင်းအဖြစ် ခေါ်လကိုရ သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် ဒေါ်ရှေ့က တပ် ပြီး ခေါ်ကြရပေမဲ့ အသက်အားဖြင့် သိပ်မကြီးလှသေးတာကြောင့် လက်အောက် ၀န်ထမ်းတွေ က ( မမ ) လို့ဘဲ ခေါ်ဆိုကြလေ သည် .. ။
( မမ ကျနော် ရောက်ပါပြီ . .) သူမ ရှေ့မှာ ငရဲ လက်နှစ်ဘက် ရှေ့မှာယှက်ပြီးရိုကျိုးကျိုး ခေါင်းလေးငုံ့ကာ လာပြောသည် .. ။ဒီလို လုပ်ပြလို့ ဒီကောင်လေး ကို သူမ မယုံ . .။ သူမ ကားပေါ်က အဆင်း တဏှာခိုးတွေ လျံနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ သူမ ရဲ့ အနောက်ပိုင်း ဖင်တုံး တွေ ရဲ့တုန်ခါမှုတွေ ကို စူးစူး ၀ါးဝါး ကြည့်နေတတ် သည် ။
မနက်တိုင်း ရုံးသွားရန် ငရဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကို အိမ်မှာ လာခေါ်ရ သည် . .။ ငရဲ ကို သူမ တွေ့တိုင်း သက်နွယ်ဦး နဲ့ ဆွေမမခိုင် တို့ ပြောဆိုနေတုံး က စကားသံတွေ ကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိလေ သည် . .။ ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး တဲ့ အကြောင်း . .။ ဒီအခါမှာ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ မျက်လုံးတွေ ဟာ ငရဲ ရဲ့ ကိုယ် အရှေ့ဘက် အောက်ပိုင်း ကို အလိုအလျောက် ရောက်သွားမိ တတ်လို့ ချက်ချင်း မျက်လုံး လွှဲဖယ်ပစ် ရ သည် ..။ လုံချည်အပေါ်ကနေ ဘာမှလဲ မတွေ့နိုင် မသိနိုင်ရက် နဲ့ ဘာကြောင့်များ ဒီမျက်လုံးတွေ က ရောက်ရောက်သွားရပါလိမ့် ဆိုပြီး ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သူမ မျက်လုံးတွေ ကို အပြစ်တင်မိ သည် . .။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရုံးရောက်ခါနီး ..ကားမောင်းနေသော င၇ဲ ကို စကားပြောသည် ။
( ငရဲ . .)
( ဗျာ . ..မ မ )
( မင်း လာမဲ့ စနေနေ့ အားလား . .)
( အား ပါတယ် . .မမ . .ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဟင် . .)
( အေး . .အိမ်မှာ အ လုပ် လုပ်စရာ နဲနဲ ရှိလို့ လာ နိုင်မလား .. .)
( ဟုတ်ကဲ့ မ မ ...ရပါတယ် . .ဘယ်အချိန် လာရမလဲ . .)
( မနက်ပိုင်းပေါ့ . .)
( ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် လာလုပ်ပေးပါမယ် . .)
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကားပေါ်က အဆင်း ..မသိမသာ စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အနောက်ပိုင်း ဆတ်ဆတ်ခါနေတဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်တွေ ကို စားတော့ဝါးတော့ မတတ် စူးစူးဝါး ၀ါးကြည့်နေသော ငရဲ ကို တွေ့လိုက်ရပေ သည် . .။ တကယ်တော့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် အပျိုကြီး မမ ဆိုပေမဲ့ ယောက်ျား နဲ့
ကြုံဘူး အတွေ့အကြုံ ရှိသည် . .။ ..လိုးဘူး ..သည် . .။ သူမ သည် ယခုအခါ ရုံးမှာ ရာထူးကြီးကြီး နေရာ ရောက်နေတာကြောင့် ..တော်ရုံ ယောင်္ကျား ကို လင်မတော်ချင်လှ . .။ သူမ ထက် ထက်မြက်ပြီး
၀င်ငွေမြင့်.. . .ရာထူးကြီးမြင့်မှဘဲ လင်အဖြစ် ရွေးချယ် လိုတာ ကြောင့် သူမ မှန်းထားတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုး
..မရနိုင်ဘဲ . .အပျိုကြီး မမ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာပေ သည် . .။ လူရှေ့ မျာ ဟန်ဆောင် ကာနေရပေမဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း စိတ်ထဲမှာတော့ ငရဲလို
လူနံပိန်ကျွဲဂျိုလိန် ခါးအားကောင်းကောင်း နဲ့ တကယ် လိုးပေးနိုင်မဲ့ ကောင်ငယ်လေး တယောက် နဲ့ နင်လားငါလား ..ရင်ဆိုင် နွှဲပစ်လိုက်ချင် သည် .. ။
ယောင်္ကျား ရဲ့ လိုးတဲ့ အရသာ ကို ခံဘူးတာကြောင့် စိတက် တောင်းလာတဲ့ အခါ . .
ခံပစ် ကုန်းပစ်လိုက်ချင်တဲ့ စိတ် သူမမှာ ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည် . .။
( မျက်စိထဲက ထွက်ကို မထွက်ဘူး . .ကိုယ့် အသွေးအသား ရိုးတွင်းချင်ဆီ အထိ . .) ခင်ချိုအုံး သည် ( စွဲနေပြီ . .) ဆိုတဲ့ သီချင်း ကို တိုးတိုးလေး ငြီး ရင်း ရုံး ထဲကို ၀င်လိုက် သည် . .။ ခင်ချိုအုံး ဒီနေ့ ရုံးကို လာတော့ သူမ ရဲ့ ပေါင်ကြား က ပိပိ က
ကျိန်းစပ်နေဆဲ . .။ မနေ့ ညနေ က ငရဲပေါ့ . .။ တအားဆောင့်ဆောင့် လိုးတာ . .။ သူ့ လီးကလဲ တကယ့်စူပါဆိုက်ကြီး ။လိုးအားကလဲ သန်ပါဘိနဲ့ . .။ခင်ချိုအုံး . .သုံးချီလိုးတာ ငါးချီ ပြီးရ သည် . .။ ဘာဂျာကလဲ ရေရေလည်လည်ကိုင်ပေး သည် . .။ ငရဲ နဲ့ ပဲခူးက ဆီစက်မှာစပြီးလိုးမိသွားကထဲကခင်ချိုအုံးသည် . .အရူးအမဲသားကျွေးမိသည်
ဆိုသလိုဘဲ .. ငရဲ လိုးတာကို . .ငရဲ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို စွဲ သွားသည် . .။ အခွင့်သာတိုင်း ကုန်း ဖြစ်သည် .. ။ ဒါတောင် အဲဒီတုံး က ကြမ်းပြင်တွေ ရော စားပွဲတွေရောက ဖုံတွေနဲ့ ညစ်ပေနေတာကြောင့် မော်တော်ဆတ် . .မတ်တပ် ဆော် ရတာ . .အဟီး . .။ ခင်ချိုအုံး ဆီစက်ထဲ လိုးကြတာကို ပြန် စဉ်းစားတော့ ဖြန်းကနဲ ကြက်သီးတွေ ထ မိပြန် သည် . .။ ခင်ချိုအုံး သည် ကျောင်းသူဘ၀ မှာ လင်နောက်လိုက်ဘူး သည် . .။ခင်ချိုအုံး ကို ခိုးပြေးခဲ့တဲ့ ကောင်ကလဲ တကယ့် ငဖြုတ် . .။ ကာမရာဂ ...အား ကြီးတဲ့ ကောင် . .။ သူ့ နံမည် က ဇေယျာ တဲ့ ..။ ဖေယျာ ကြောင့်ခင်ချိုအုံး..ကာမ.အတွေ့အကြုံ စုံခဲ့သည် ..။ ဇေယျာ သည် ခိုးပြေးသော တပတ် အချိန် မှာ
နေ့တိုင်း တနေ့ ကို ခုနစ်ချီ အနဲဆုံး လိုး သည် . .။ဒါကြောင့် ခင်ချိုအုံး သည် ၀ါရင့်နေပြီ ..။
ဇေယျာ ဆိုတဲ့ ကောင် က ပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ လိုးခဲ့လို့ ခင်ချိုအုံး သည် လိုးနည်းမျိုးစုံကိုလဲ
ကျွမ်းနေသည် . .။..သူမ အတွက် လိုးတာဟာ အဆန်းမဟုတ်တော့ . .။သူမ
ဆာလောင်တောင့်တချိန်မှာ ငရဲ နဲ့ တွေ့တော့ ငရဲ ကို ပေးလိုးလိုက်တာ ဖြစ် သည် ..။လိုးလက်စ ရှိတော့လဲ . .အမြဲချိန်းလိုးလေ သည် .. ။ သက်နွယ်ဦး က ခင်ချိုအုံး ကို သတိပေးသည် . .။ ( ယူ့ဘဲလေး က အရာရှိမမ ကို ရှိုးတဲ့ပုံက မရိုးဘူး . .။သူ့ အကြည့် က မမကြီး . .အ၀တ်တွေ ကို ဖေါက်ထွင်းမြင်နေရတဲ့ ပုံလေ . .မမကြီး ထမိန်မှာ ငရဲ ရဲ့ မျက်စိတွေ ငြိကပ်ပြီး ပါသွားကြတယ် လို့ ထင်ရတယ် . .) တဲ့ . .။ ဟွန်း . .ကြားခါစကတော့ သ၀န်တိုမိသလိုဘဲ . .။ နောက် ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့ ငရဲ နဲ့ ဆက်ဆံ ထိတွေ့ ညိစွန်းခဲ့ကြပေမဲ့ ချစ်ခဲ့တာမျိုး မဟုတ်ဘူး . .။သေသေချာချာ စဉ်းစားတော့လဲ သူ ငရဲ ကို မချစ်မိ . .။ ကာမ စိတ် နဲ့ သွေးသား ဆန္ဒ ကို ဖြေဖျောက်ကြ တာဘဲ ဖြစ် သည် . .။ဒါကြောင့် ငရဲ ကို ဘာမှ မဟန့်တား . .။ စိတ်ထဲမှာ ဘ၀င်လေဟတ်သလို ဂိုက်ပေး . .ပဲများနေတဲ့ အရာရှိမမ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကို ငရဲ ရအောင် ဖန်နိုင်ရင် ကြည့်ကောင်းမဲ့ ပွဲ ဘဲ လို့တောင် ထင်မိ သည် . .။ ယာဉ်မောင်းကောင်ငယ်လေး တယောက် နဲ့ အရာရှိမမ တို့ ရဲ့ အပြာ ဇာတ်လမ်း က စိတ်ဝင်စားစရာ မဟုတ်လား ။ဂျာနယ်ထဲ ထည့်ရေးလိုက်ရလို့ကတော့ အဲဒီဂျာနယ် ..ရောင်းကောင်းသွားမယ်...။ လူတွေ က အညှီအဟောက်သတင်း ဆို သိပ် ဖတ်ချင်ကြတာလေ . .။
သောကြာနေ့ ည . .။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ဥာဏ်များနေသည် . .။ သူမ သည် သတင်းကြားထားသော ငရဲလီးကြီးတာ ကို အတည်ပြု ချင်သည် . .။ သူမ မျက်စိ နဲ့ ကိုယတ်ိုင် တွေ့ချင် သည် .. ။ ထို့ကြောင့် ဥာဏ်များနေတာ ဖြစ်သည် ။ ဘယ်လိုဥာဏ်များနေသလဲဆိုတော့ . .။ မနက်ဖန် ငရဲကို ခြံထဲ မြေတွင်းတူးရန် .အကူ ခေါ်ထား သည် .. ။ ပြီးရင် ငရဲ ကယိုမှာ ပေကျံတာတွေကို အကြောင်းပြုပြီး ငရဲကို သူမ အိမ်အောက်ထပ် က ရေချိုးခန်းမှာ ရေချိုးခိုင်းမည် . .။ ခုညထဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် အဲဒီ ရေချိုးခန်းမှာ အပေါက်ငယ်တခု ကို ဖေါက်ထား ပါ သည် . .။ငရဲ ရေချိုးမဲ့နေရာ ကို မြင်သာမဲ့ ချောင်းဖို့ အပေါက် ဖေါက်ထားလိုက် သည် . .။ အင်း . .ငရဲ ရဲ့ လီးတုတ်တုတ်ကြီး ကို တွေ့ရချည်သေးရဲ့ . .။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သောကြာနေ့ ညလဲဖြစ်တော့ မနက် စောစော ထစရာမလိုလို့ အွန်လိုင်း မှာ စာ ဖတ်လိုက် Tube8 ဆိုတဲက အပြာဆိုက် ကိုသွား ပြီး လီးတန်ကြီးတွေ ကို ကြည့်လိုက် နဲ့ လုပ်ရာ က သောကြာ နဲ့ စနေ တိုင်း သူ နဲ့ ချပ်တင်း လုပ်နေကျ ဘလူး လပ်ဗါ BLUE LOVER ဆိုတဲ့ တယောက် များ ရောက်နေပြီလား ဆိုပြီး သွားကြည့် လိုက် သည် .. ။ ဘလူး လပ်ဗာ ရှိနေသည် . .။ ဘလူးလပ်ဗါ က စင်ကာပူ က တဲ့ . .။ အိုင်တီ တက်ကနစ်ရှင် တဲ့ . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ချပ်တင်းလုပ်တဲ့ နံမည် က YGN girl …။
သည် နံမည် ယူထားတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး . .။ သူမ အိမ် ကွန်ပြူတာ နဲ့ တယောက်ထဲ ရှိတဲ့အခါ ညပိုင်း သူမ ချပ်တင်း လုပ်တဲ့ အခါ သုံးတာ ဖြစ် သည် . .။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လှမ်း နုတ်ဆက်လိုက် သည် .. ။
( ဘယ်လိုလဲ . .နေကောင်းလား . . )
( ကောင်းပါ့ဗျာ . .ကလေးမေ၇ာ . .)
( ကောင်းပါ့ ရှင် . .ရောက်နေတာ ကြာပြီလား . .)
( မကြာသေးပါဘူး . .)
( ဘာထူးသေးလဲ . .ရီးစား ရပြီလား . .)
( ဟင့်အင်း . .မရသေးဘူး . .)
( မရှာဘူးလား . .)
( ရန်ကုန်မှာ လာရှာမလို့ . .)
( ရှာလေ . .သပ်မှ မဝေးတာ . .လာချင်ရင် အနီးလေး . .)
( ကလေးမ က ကူညီမှာ လား . .)
( ဘာကို ကူညီရမှာလဲ . .)
( ရီးစား ရှာဖို့လေ . .) ( ဘယ်လို ကူရမှာလဲ . .)
( ရီးစား ရဖို့လေ . .)
( သူ့ ဟာ သူ လုပ်ရမဲ့ ကိစ္စဘဲ လေ . .)
( ကလေးမ နဲ့ တွေ့ချင်တာ .. )
( ဟုတ်လို့လား . .)
( ဟုတ်တယ် . .တွေ့ချင်တာ အရမ်းဘဲ . .)
( တကယ်လား . .)
( အင်း . .ကလေးမ အွန်လိုင်းမလာရင် ကျုပ် မနေတတ်ဘူး . .)
( ဟုတ်တယ် . .ဘိန်းစွဲသလို ဖြစ်နေပြီ . .)
( ကလေးမ များ ရှိနေမလား ဆိုပြီး ခဏခဏ ၀င်ကြည့်မိတာ မရှိရင် ဝေဒနာဘဲ . .)
( ဖြစ်ရလေ . .တကယ် လား . .)
( အင်း . .ဟိုတနေ့ က ကျုပ် က ကလေးမ တကိုယ်လုံး ကို နမ်းတယ် ဆိုတော့ ကလေးမ လဲ အရမ်း တုန်လှုပ်တယ် ဆိုတာလေး ပြန် ပြောပြပါ အုံး . .)
( ဒီအကြောင်း . .စမလာနဲ့ ကွာ . .ဒီကလဲ တယောက်ထဲ . .စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလာရင် မလွယ်ဘူး . .)
( ကျုပ်ကလဲ ဒီမှာ တယောက်ထဲ . .အရမ်း တင်းကျပ်နေတယ် . .)
( တင်းကျပ်နေရင် ဖြေလျော့လိုက်ပေါ့ . .)
( ကလေးမ လျော့ပေးပါလား . .)
( ဘယ်လို လျော့ပေးရမှာလဲ . .)
( ကလေးမ ရဲ့ လက်ကလေးနဲ့ပေါ့ . .)
( ပွတ်ပေးရမှာ လား . .)
( အင်း . .ဖွဖွလေး ပွတ်ပေး . .)
( ပွတ်ပေးနေတယ် . .သူ့ ကို လျော့ပေး ရင်း သူများလဲ တင်းကျပ်လာတယ် ..) ( လျော့ပေးရမလား . )
( ကလေးမ ရဲ့တင်းနေတဲ့ နေရာလေး ကို ကျုပ် နမ်းပေးမယ် . .)
( ကျုပ် နမ်းပေးတာ ကြိုက်လား . .)
( စိုနေလား . .)
( ဟိတ် သူ ဘယ်လိုသိလဲ . .) ( စိုနေတယ် ပေါ့ . .ဟတ်လား . .)
လှလိုက်တာ ..ကလေးမ ရယ် . .)( ( ဘာလှတာလဲ . .)
( ကလေးမ ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး . .)
( အို . .)
( နမ်းပေးမယ်နော် . .ဖွဖွလေး . .)
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ချပ်တင်း လုပ်ရင်း ပေါင်ကြား က သူမ ရဲ့ ဖေါင်းမို့ခုံးကြွနေတဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြီး
သည် အရမ်း ယားယံ လာ သည် . .။ သူမ ထမိန်ပေါ်ကနေဘဲ ပွတ်နေမိရ သည် . .။ တဖက် က ဘလူးလပ်ဗါ လဲ တဖြေးဖြေး ကြမ်းလာ သည် . .။
( ကလေးမ . .)
( အင် . .)
( ကျုပ် အရမ်းထန်နေပြီ . .ကလေးမ ကို ချစ်လို့ ရမလားဟင် . .)
( ချစ်လေ . .ချစ် . .)
( ကျုပ် ထည့်မယ်နော် . .)
( ထည့် . .ထည့် . .အင်း . .ဟင်း . .)
( ကောင်းလိုက်တာ ကလေးမ ရယ် . .)
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပေါင်ကြား က ရတနာရွှေကြုတ်ကြီး စိုစိုရွှဲလာပြီ . ။ ဖိကာဖိကာ ပွတ်မိတော့
. .တကိုယ်လုံး တုန် သွားရတဲ့ကာမ လမ်းဆုံး ပန်းတိုင် ကို တက်လှမ်းချင်လာရ သည် . .။
( သူ . .ထည့်နေလား ဟင် . .)
( အင်း . .ကောင်းလာလား . .မြန်မြန် လုပ်ပေးရတော့မလား . .)
( ဆောင့်မယ် နော် . .)
( ကလေးမ ရယ် . .သိပ် ကောင်းတာဘဲ . .)
( အင်း . .သူများရောဘဲ . .)
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တချီ ပြီးသွားရ သည် . .။
( ကလေးမ . .ကလေးမ . .)
( ဆောရီး . )
( ဘယ် ရောက်သွားတာလဲ . .)
( ရေချိုးခန်း ခဏ သွားတာပါ . .)
( ကလေးမ ပြီး သွားလား . .)
( ကျုပ်ရောဘဲ . .တင်းကျပ်နေတာတွေ လျော့သွားတယ် ....)
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ညက ဒါတွေ လုပ်နေတာကြောင့် မနက် မှာ အိပ်၇ာ က တော်တော် နဲ့ မထချင် . .။မထ နိုင်ဘူး . .။ အို . .ငရဲ ကို ခေါ်ထားတာဘဲ .. ။ ခုမှ သတိရပြီး လူးလဲထပြီး ရေချိုးခန်း ၀င်ရ သည် . .။နာရီ
နှိုးစက်ကလဲ..မလုပ်မိ . ။ မျက်နှာသစ် ..သွားတိုက်လုပ်နေတုံး ..အိမ်ရှေ့တံခါး က ( တင်..တောင်
. .တင်တောင်. .) ဆိုတဲ့ ဘဲလ်သံ ကြားလိုက်ရသည် . .။ ဟား..ငရဲေ၇ာက်နေပြီ ထင်တာဘဲ . .. ။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပြေးဆင်းသွားသည် . .။ ဟုတ်ပါသည် . .။ ငရဲပါ . .။ ( ဟေး . ငရဲ . .တယ်ဝိရိယ ကောင်းပါလား .. မမ လဲ ခုနမှ ထတယ် . . .) ငရဲ က ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ဘလောက်စ် တထပ်ထဲ ၀တ်ထားလို့အထဲကနို့ကြီးတွေ လှုပ်ခါတာ ကို ငေးကြည့်နေသည် ။နို့သီးထိပ်ဖုလေးတွေ က ပိတ်သားပါးပါးမှာ ကပ်နေတော့ အရာလေးတွေမြင်ရ တာ စိတ်လှုပ်၇ှားစရာဘဲလေ . .။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ငရဲ သူမ ရင်ဘတ် ကို တပ်မက်တဲ့ မျက်လုံးတွေ နဲ့ ကြည့်တာ တွေ့ သည် .. ။
( လာ..ကော်ဖီ သောက်အုံး . .)
( ကျနော် အိမ်နားက လဘက်ရေဆိုင်မှာ သောက်ခဲ့ပြီးပြီ မမ . .)
( အို..ထပ်သောက်ပေါ့ . .လာ . .လာ . .) ငရဲ နဲ့ မီးဖိုခန်းမှာ နှစ်ယောက်ထဲမို့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားနေသည် . .။
ကော်ဖီသောက်ရင်းလဲ သူမ နို့တွေ ကို ငရဲ စိုက်ြကည့်နေသည် . .။သူကြည့်တဲ့ ပုံက အခုဘဲ နို့ တွေကို အတင်း လှန် စို့တော့မဲ့ပုံ . .။
ခြံထဲမှာ လုပ်စရာ အလုပ်တွေကို ငရဲ ကို ပြ သည် . .။ ငရဲ သည် ပုဆိုးအဟောင်းတထည် ကို ခပ်တိုတို
၀တ်လိုက်ပြီးသူ့ အပေါ်က တီရှပ် ကို ချွတ် ပစ်လိုက်သည် . .။ငရဲ ရဲ့ တောင့်တင်းသော ကိုယ်လုံး ကို
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ယောက်ရက်ခတ်နေသည် ..။
သူမ ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲ ၀င်လာ သည် .. ။ ငရဲ ချွေးတွေ စိုရွှဲနေသလို မြေကြီးတွေလဲ
ပေကျံနေတာကြောင့်. . .ရေချိုးခိုင်းလိုက် သည် . .။ ငရဲ အတွက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ နဲ့ ဆပ်ပြာခွက် သူမ ယူပြီး သွားပို့ပေး သည် .. ။ ငရဲ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားတော့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း တဖက် က အပေါက်ကနေ ချောင်းတော့တာဘဲ . .။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ငရဲကို ကိုယ်တုံးလုံးကြီး တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်း ထ ရတော့ သည် .. ။ သူမ ကြားဖူးနေရတဲ့ ငရဲ ရဲ့ လီးတန်ကြီး ကို သူမ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ . .မြင်လိုက်ရသောကြောင့် ပါဘဲ . . .။
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ပေါင်ကြား က မို့ဖေါင်းခုံးထနေသော အင်္ဂါစပ် ကြီး သည် ကာမ စိတ် ကြောင့် ပိုပြီး
ဖေါင်းကြွနေပြီ. . ။ ကာမေ၇ှ့ပြေး အရေကြည်တွေ စိုစိုရွှဲနေပြီ . .။
ငရဲ သည် ရေချိုးရင်း . .သူ့ လိင်တန်လီးကြီးကို လက် နဲ့ ဆုတ်ကိုင် ကာ ဆွ
နေသည် ။ လီးကြီး သည် တန်ကနဲ ထောင်ထ လာ သည် . .။ အို ..တကယ် ကြီးပြီး ရှည်တဲ့ လီးဘဲ
. .အို . .ငရဲ ရယ် . .ငရဲကြီးတာ ...မမ သိနေပါတယ် . .ကွာ. . . .
သူမ ကြည့်နေဆဲ ငရဲ သည် . .အသံထွက်ပြီး . .( မမ ရယ် . . .မမ ကို လိုးချင်တယ် . . .) လို့တိုးတိုး
ပြောနေရင်း . .သူ့ လီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ကွင်းတိုက်နေပြီ . .. ။ အို . .သူ ငါ့ကို မှန်းပြီး ကွင်းတိုက်နေပါလား . . .
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းသည်..အရေတွေ.စိုစိုရွှဲနေသော..သူမရဲ့ရတနာရွှေကြုတ်ကြီး.ကိုလက်နဲ့..ပွတ်သပ်..ကိုင်တွယ် နေမိရ ပြီ . ..။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း သည် ငရဲ ရဲ့ လီးကို ကြည့်ပြီး သူမ အင်္ဂါစပ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လက်ချောင်းများနဲ့ ပွတ်ချေနေမိရင်း . .ကာမ စိတ်တွေ ကြွသထက်ကြွလာရ သည် . . .။
ငရဲ သည် ကွင်းတိုက်နေရာက ဆက်မတိုက်တော့ဘဲ ရုတ်တရက် မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီးကို အမြန်ခါးမှာ ပတ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ က ထွက်လိုက်သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ထမိန်ဖြေချွတ်ခါ လက်နဲ့ မိမိ .. ဖါသာ ပွတ်ပြီး အာသာ ဖြေမိနေရာက ငရဲ ခုလို ဗြုံးကနဲ ထွက်လာလို့ ..ထမိန် ကို အမြန် ပြန်ဝတ်ပြီး သည်နေရာ က ပြေးဖို့ ကြံစည်သည် . .။
( မမ . .ဘယ်ပြေးမလို့လဲ . .)
( မမ . .ဟို . ဟို . .)
( မမ ကျနော့်ကို ချောင်းနေတာ သိတယ် . .မမ ကျနော့် ကို မညာပါနဲ့ဗျာ . .)
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း လဲ ရှက်ပြီး ထွက်ပြေးဖို့ လုပ်ပေမဲ့ ငရဲ က သူမ လက် ကို ဖမ်းဆွဲထားလိုက်တာကြောင့်
ပြေးလို့ မရဘဲ ငရဲ ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်မိနေရ သည် . .။
( လာပါ . .မမရယ် . .မမ ကို ကျနော် သဘောကျနေတာ ကြာပါပြီ . .အခု မမ အိမ် မှာ ကျနော် နဲ့ မမ ဘဲ ရှိတာ . .ချစ်ကြရအောင်ပါ . . )
( အို . .ငရဲ . .မင်း . .မင်း . .ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ . .ငါ့ကို ဘယ်လို မိန်းမများအောက်မေ့နေလို့လဲ လွှတ် . .လွှတ် . . )
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရှက်ရမ်းရမ်းနေမှန်း ငရဲ က သိပေ သည် . .။ ငရဲ က သူမ ကို အပေါ်ထပ် က သူမ အိပ်ခန်းကြီး ထဲ ကို ဆွဲခေါ်သွား သည် . .။
( ခက်တော့တာဘဲ ငရဲ ရယ် . .ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲကွာ . .)
( ချစ်ပေးမယ်လေ . .မမ ကို ကောင်းကောင်း ချစ်ပေးမလို့ . .)
( ငရဲ . .မမ တောင်းပန်ပါတယ် . .လွှတ်ပါ . . .)
( နိုး..နိုး . ..မရတော့ဘူး . .ကျနော် သိပ်ထန်နေပြီ ...မမ လဲ ထန်နေတာဘဲ မဟုတ်လား ...)
( အို..မင်း..မင်း..ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ ..ဘာထန်တာလဲ..) င၇ဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲ က ကုတင်ပေါ်ကို ရောက်နေပြီမို့ သူ ခါးမှာ ပတ်လာသော မျက် နှာသုတ်ပုဝါကို ဖြုတ်လိုက် သည် ..။နံမည်ကြီး စံချိန်မှီ လီးတန်ကြီး ထင်းကနဲ ပေါ်လာသည် ။
( မမ ကြောက်တယ်ကွယ် ...) ငရဲက ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို ချွတ်သည် ..။
( ဘာကို ကြောက်တာလဲ ..မမ..)
( မင်းရဲ့ လက်နက်ကြီး ကိုပေါ့ .....)
( မမ နာမှာစိုးလို့လား . . .)
( အင်းပေါ့..မင်း ဟာကြီးနဲ့ဆို မမ ဟာ ကွဲသွားနိုင်တယ် . . )
ပြောပြောဆိုဆို ငရဲ သည် မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဗလာကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေသောဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ..ကိုပက်လက် အိပ်စေပြီး..သူမရဲ့ပေါင်ဖြူဖြူဖွေးဖွေးတွေအကြားကိုမျက်နှာအပ်ပြီးသူမရဲ့ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကို..စတင်နမ်း ရှုံ့ ပါတော့ သည် . .။ ငရဲ ...အို..ငရဲ... .. ဘာ..ဘာတွေ..လုပ်နေတာလဲကွယ်.......
ငရဲ သည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့တင်းနေတဲ့နို့ကြီးတွေ ကို သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ဆုတ်ထားပြီး နို့သီးထိပ်ဖုလေးတွေကို သူ့ လက်မနဲ့လက်ညှိုးကိုသုံးပြီး သာသာလေး ချေပေးနေသည် . .။သူ့လျာကို အစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီး . .စုတ်တံနဲ့ ဆေးသုတ်သလို အပေါ်အောက် စုံချီဆန်ချီ . .ရတနာရွှေကြုတ်ကြီးကို ယက်ပေးလေတော့ရာ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်းမှာ ရေငတ်တုံး ရေတွင်းထဲကျသွားရသည် ဆိုသကဲ့သို့ . .ကာမ
အရသာထူးကို ရနေပြီမို့ . .ကျေနပ်စွာ ငရဲ ယက်သမျှကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ခံနေပါတော့ သည် . .။
ငရဲ သည် သည် အခွင့်အရေးကို ချောင်းနေတာ ကြာပြီ . .။ အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်ခံသူ မဟုတ်တာကြောင့် ဆာလောင်နေတဲ့ ဒီမန်နေဂျာမ . .သူ့ ကို အိမ်ခေါ်ကထဲ က အခွင့်အရေးရ ရင် ဗြုန်းပစ်မည် လို့ ဆုံး ဖြတ်ပြီးသား . .။ ပညာစွမ်းတွေ အကုန် ထုတသ်ုံးကာ ဒီမမကြီး သူ့ကိုစွဲသွားအောင် လုပ်မည် လို့လဲ သူ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ သည် မဟုတ်ပါလား . . .။ ငရဲ သည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ကြိး ကို ရေရေလည်လည်
လဲ သဘောကျ သည် . .။ အနံ့ အသက်လဲ မဆိုး . .။ သေသေချာချာ အမြဲ သန့်ရှင်းပုံရ ည် . .။ အမွှေးလဲ ပါးထား . .ညှပ်ထား သည် . .။ တော်တော်လတ် တဲ့ မုံ့ပေါင်းကြီး . . .။ တဗွီးဗွီး နဲ့ မှုတတ်ာဒေါ်မီမီခိုင်မင်း မှာ ဖင်ကြီးတွေဘယ်ညာရမ်းခါလိုက် ကော့လိုက်နဲ့ သဘောကျနေသည် . .။
နှုတ်ဖျားကလဲ . .ငှက်ဖျားဝေဒနာသည်တယောက် အဖျားတက်သလို . .ဟင်းဟင်း . .ဟင်းဟင်း . . နဲ့ ညည်းနေသည် .။
ငရဲ ရဲ့ ယက်ပေး စုတ်ပေးတာတွေ က အသဲခိုက်အောင် ကောင်းလှ သည် .။ငရဲ
သည် ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရတနာရွှေကြုတ်အတွင်းထဲကို သူ့ လျာထိပ်နဲ့ထိုးသည် . .။
( အို့အို . ..အို့အာ......အာ...)
. .။သူမ ဖင်တွေ ဗရမ်းဗတာ ရမ်းခါနေ၇ပြီ . .။ ( အို . .ငရဲ ရယ် .. . ..တော်...တော်ပါတော့ . . .) ငရဲ က တအားနင်း ...ယက်နေသည် . .။ ငရဲ လျာကြီး သူမ အတွင်းထဲ မွှေနေဆဲ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း
. .ပြီးသွားရ သည် . .။ ငရဲ . မှုတတ်ာ ရပ်လိုက် သည် . .။ အို . .သူ . .သူ . .လိုးဖို့ ကြံနေပြီ . .။ဒေါ်မီမီ ခိုင်မင်းကိုယ်ပေါ်မှာ နေရာယူနေပြီ . .။ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ပေါင်တန်တွေ ကို သူ တွန်းခွဲလိုက် ပြီး သူ့ လီးတန်ကြီး ကို တေ့ကာ ထိုးသွင်းတော့ ..လုံးပတ်တုတ်လှတဲ့ ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး . .၀င်လာတာ ဗျိကနဲ တင်းကျပ်နေတာမို့ ..သူမ ဟာ ပြဲသွားမှာကို ကြောက်သွားပြီး . .( ငရဲ . .ဖြေးဖြေး..မမဟာ ကွဲသွားအုံးမယ် လို့ ပြောလိုက်သည် . .။ ငရဲ က ( မကွဲပါဘူး..မမရယ် . .မမ အဖုတ် က ... အရေတွေတအားရွှဲနေတာ အိုကေပါတယ် . .) လို့ . .ပြောရင်း သူ့လီးတန်ကြီးကို .ဆက်..ထိုးသွင်းလေ သည် . .။( အို . .. .အ...အ...အ...ငရဲ . ..)
ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး တဆုံး ၀င်သွား သည် . .။ ငရဲ ရဲ့ ဆီးခုံ နဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း အထိ ဘဲ . .။အို . .သူ့ အတန်ကြီးတခုလူံး ငါ့အထဲ အောင်းနေပြီ . .ဆိုတဲ့ အတွေးက ကြက်သီးတွေ ထစေ သည် . .။ ငရဲ က နို့တွေ ကို ဘယ်ညာပြောင်းပြီး စို့နေသည် .. ။
( မင်း . .မမ နဲ့ မင်းအကြောင်း ဘယသ်ူ့ မှ မြေ့ပာနဲ့ နော် . .)
( စိတ်ချပါ မမ ရယ် . .မမ က ကျနော့် ကို ခုလိုဘဲ ပေးလိုး မယ် မဟုတ်လား . .)
ငရဲ ရဲ့ လီးကြီး စ လှုပ်ရှားလာပြီ .. ။
တကယ့်ကို ထိတာ . .။ တချို့မိန်းမ တွေ က လီး ကြီးကြီး သေးသေး ဂရုမစိုက်ဘူး . .ကြာကြာ ပြီးအောင်မ လိုးနိုင်ဖို့ဘဲ လိုတယ် လို့ ပြောကြပေမဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ကတော့ ငရဲ လို လီးကြီးကြီး နဲ့ အလိုးခံရတာကို ပိုပြီး ကြိုက် ပါသည် . .။
သူမ ဟာအတွင်းထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတာကြောင့် သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်တိုင်း ..အတွင်းနံရံ တွေ ကို
ပွတ်တိုက်မှူက ပြင်းထန်တာကြောင့် တကိုယ်လုံး တုန်ခါနေရလောက် အောင်ဘဲ ..ကာမ အရသာတွေ တင်ပြည့်ကျပ်ပြည့် ရရှိရတာမို့ . .ငရဲ ရဲ့ လီးတန်ကြီး ကို နှစ်ခြိုက်စွဲလန်း မိပေ သည် . .။
ငရဲ သည် အစမှာ ဖြေးဖြေး လိုးထည့်နေရာက အရှိန်ရလာတော့ ခပ်သွက်သွက်
လိုးဆောင့်လာ သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း က ဘာမှ မပြောဘဲ မျက်လုံးစုံမှိတ်ခါ . .ခံနေလို့ ငရဲ သည် ခပ် ပြင်းပြင်း ဆောင့်ဆောင့် လိုးလေ သည် . .။ အင့် . .အင့် . ..ငရဲ..ငရဲ . .. ဘာဖြစ်လဲမမ ..နာလို့လား . .
ဟင့်အင်း . .ထိ...ထိလို့ . . .ရတယ် . .ဆောင့်..ဆောင့် . .. ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ဖင်တွေ ဘယ်ညယ လူးနေ သည် . .။ ဆတ်ကနဲဆတ်ကနဲ . .ကော့ပင့်ပေးလာ သည် . .။ ငရဲ က ဆောင့်တဲ့ အချိန် နဲ့ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း က ပင့်ပေးတဲ့ အချိန် နဲ့ . .ဆုံ မိတတ် သည် . .။အိုး . .အား...နဲ့ ကာမ အရသာထူး ရသွားပြီး ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း . .အောက်မှ တအား ကော့ပေးနေသည် . .။
( ဆောင့် ဆောင့်ဆောင့် .....ဆောင့်ပါ . .ငရဲလေး . .ဆောင့်ပါ နာနာ . .ကွဲချင်ကွဲသွားပါစေ
. .ဆောင့်ပါတော့ . .ကြုံးဆောင့်ပါတော့...အီး...အီ....) ကာမ အရှိန်တက်လာတော့ သွေးရူးသွေးတန်း ပြောချင်ရာ ထွက်ချင်ရာတွေ ပြောထွက်နေပြီ . .။
( ကောင်းလားဟင် . .မမ )
( အင်..အင် . .ကောင်း . .ကောင်း . .ကောင်း တယ် . . .)
( မမ စောက်ပတ်လဲ သိပ်ကောင်းတယ် . .မမစောက်ပတ် ကြိုက်တယ် . .)
( ဆောင့်ငရဲ . .မမ..မမ..မမလေ . .မမ အို . .ပြီးတော့မယ် . . .လိုး . .လိုး . . .)
ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း မရှက်တော့ . .လိုး . .လိုး . . ပါ . .တအား . .လိုးပါ . .လို့ တောင်းဆိုနေတော့သည် .. ။ ငရဲ သည် အားကုန်ကြုံးကာ လိုးပေးနေသည် . .။ တဖမ်းဖမ်း . .အသားချင်းထိတွေ့သံတွေ
. .တဘွတ်ဘွတ် အသံတွေ . .ဆူညံနေ သည် . .။
( အို . .အို . .. ကောင်း . .ကောင်း . .ပြီ . .. . .ငရဲ ရယ် . . .မမ . ..မမ . ..ကောင်းလိုက်တာ . . .) ကာမ ပန်းတိုင် ကို တက်လှမ်း ရောက်၇ှိသွား သည် . .။ ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း . .ကော့လန် ကာ ခေါင်းအုံးတွေ ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်လိန်ရင်း . ..ပြီး သွားရ သည် . ..။ ငရဲ သည် နဂိုထဲက ပြီးချင်နေတာပါ . .မမဒေါ်မီမီခိုင်မင်း....ပီးအောင်..ဆွဲလိုးပေးနေတာသာ
ဖြစ်လို့. . .ဒေါ် မီမိခိုင်မင်း လဲ ပြီးရော . .သူလဲ ..ပြီးလိုက်လေ သည် . .။ သုတ်တွေ ဒလဟော
. .ဒေါ်မီမီခိုင်မင်း ရဲ့ ရတနာရွှေကြုတ်ြကီးထဲ ပန်းထုတ် ကာ ကာမ အရသာထူး ၇ရှိသွားရပြီး . တကိုယ်လုံး ကျင်တက် ပြီး . .. ပြီးသွားပါ သည် . .။
( ကောင်းလိုက်တာ မမ ရယ် . . .အရမ်.း ဘဲ ကောင်းတယ် . . )
( မမရောဘဲ . .မမလေ . .ငရဲ ကြီးတာ ကို ဟိုး အစောကြီးထဲက သိနေတာ . .သိလား . . .)